porn အသုံးပြုမှုကိုငါ့စိတ်ခံစားမှုတုံးနိုင်သလား? - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ညစ်ညမ်းစာကိုစွန့်လွှတ်သောပုံမှန်အသုံးပြုသူများသည်မမျှော်လင့်သောအပြောင်းအလဲများကဲ့သို့သတင်းပို့လေ့ရှိသည် တိုးတက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု, တိုးမြှင့်ယုံကြည်မှုနှင့်သွားလာခြင်းမှအလိုဆန္ဒ, ပိုကောင်းတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု, ပိုပြီးကျေနပ်စရာရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး ဒါဘွား။ သို့သော်လည်း, သူတို့သည်လည်းမကြာခဏအခြားပြောင်းလဲမှုအပေါ်သဘောထားမှတ်ချက်: သူတို့ကပိုပြီးခံစားရတယ် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးမှာမကြာခဏကြိုဆိုနှင့် unnerving နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင် porn တက်ပေးခြင်းနှင့်အတူစမ်းသပ်ယောက်ျားတွေထဲကနေတချို့ Self-အစီရင်ခံစာများနေသောခေါင်းစဉ်:
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "လူအများစုအသိအမှတ်ပြုပုံမရသည့်အချက်မှာသင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်မခံစားခဲ့ရသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုသင်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်၊ မင်းအတွက်အရေးမကြီးသောမိန်းကလေးများသည်သင်၏ဘုရင်မင်းဘဝ၏ရုတ်တရက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ မင်းစမ်းသပ်မှုမအောင်မြင်ဘူးလား။ မင်းဒါကိုမမှုတ်ဘူး၊ မင်းရဲ့အတန်းကိုသင်စိုးရိမ်တယ် သငျသညျနှစ်ပတ်အတွင်းလာမယ့်နောက်ဆုံးစိတ်ပူ။ ပြီးတော့ဒါကောင်းတယ် ငတေကောင်းတယ်
ဤအရာသည်သင်လေ့လာသင်ယူခဲ့ရသောဆင်းရဲဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဒါပေမယ့်ထိခိုက်လိမ့်မယ် အချက်များမှာသင်ဝမ်းနည်းရမယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီထောင်ချောက်ထဲမကျပါနဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကုန်သွားတယ်၊ အမှတ်တရတွေလည်းပျောက်သွားတယ်၊ ပြီးတော့မင်းအဲဒါကိုပိုပြီးအားကောင်းလာလိမ့်မယ်။ သင်၌နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားမှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုရှိကြောင်းသတိရပါ။ ခင်ဗျားသက်တောင့်သက်သာမဖြစ်နိူင်သော်လည်းမလွယ်ကူပါ။
တိကျစွာဘယ်လိုသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုထုံသနည်း? ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည် homeostasis အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ငါတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိုးဆွမှုတွေနဲ့ထိုးနှက်ခံရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကညှိပေးတယ် ဥပမာအားဖြင့်သူတို့သည်အာရုံကြောဆဲလ် receptor အဆင့်များကိုအဓိက neurotransmitter များအတွက်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအချက်ပြချက်များကိုအသံတိတ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်နာတာရှည် overimimulation သည် numbness (သို့) တစ်ချိန်ကအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောမှတ်ပုံတင်ထားသောလှုံ့ဆော်မှုများအပါအ ၀ င်လှုံ့ဆော်မှုများကိုတိတ်တိတ်လေးတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သုတေသီများသည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲသူများတွင်“ desensitization” (ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုနံပါတ်ထည့်သွင်းခြင်း) ၏သက်သေအထောက်အထားများကိုဖွင့်ထားသည်။ 1, 2, 3, 4, 5, 6, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် အင်တာနက်စွဲ, အစားအသောက်စွဲ နှင့် လောင်းကစားစွဲ။ တကယ်တော့အားလုံးအမူအကျင့်စှဲ desensitization တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်သော၏တူညီသောအခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲမျှဝေပါ။
သို့သော်လုံးဝသူတို့အားတွေ့ရှိချက်လျစ်လျူရှု, SPAN Lab မှ, Kinsey grad (UCLA sexologist Nicole Prause) က ဦး ဆောင်။ ၃ မိနစ်ကြာလိင်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်နှင့်အခြားရုပ်ရှင်နှစ်ခုလုံးအတွက်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများမှတဆင့်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အံ့အားသင့်စရာတော့မရှိပါဘူး၊ ပြuseနာမရှိတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲရှိသောသူများထက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းစိတ်ခံစားမှုများပိုမိုကျယ်ပြန့်လာကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ သုတေသီများကခြားနားချက်ကိုရှင်းပြရန်မရှင်းပြခဲ့ကြပါ။ ညစ်ညမ်းစွဲသူများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ဒီအယူအဆအတွက်သီအိုရီအရအခြေခံကျခြင်းမရှိဘဲ) ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပြသသင့်ကြောင်းနှင့်သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျဆင်းလာမှုပမာဏသည်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများကိုစွဲလမ်းသူများမဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြသင့်ကြောင်းသူတို့ကစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ (ဟမ်?)
အဖြစ်မှန်ထုံဦးနှောက်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည် နည်းသော လှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်မှု - အကယ်၍ ထိုလှုံ့ဆော်မှုများသည်ကြည့်ရှုသူ၏အထူးစွဲလမ်းမှုအတွက်မဟုတ်ပါ။ ာင်း) ။ ထိုအခါအဖြစ်မှန်ယခုမြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများအတွက်တက်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲချိတ်ဆက်လေ့လာရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု
Update ကို။ အကွိမျမြားစှာလေ့လာမှုများဆင်းရဲတဲ့သိမြင်မှုရလဒ်များကိုမှ porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်: ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှုများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယောက်ျားများအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းအမျိုးသားအထီးကျန်စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ပconိသန္ဓေတည်ချက်ကိုပုံပျက်နေသလား။ ဒီနေ့ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ခံစားမှုအတိုင်းအတာထက်နည်းနည်းပိုများတာကိုပြနေတာလား၊ သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာဒီနေ့ပုံမှန် hyper-erotic online smörgåsbordsကိုတုန့်ပြန်မှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာ“ ထိန်းချုပ်မှုအောက်” ကျဆင်းသွားလို့လား။ (အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည် တူညီသောကိစ္စရပ်များအားသတင်းပို့, စကားမစပ်။)
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ၊ တစ်ယောက်တည်းနေရသော်လည်းအတော်လေးပျော်ရွှင်သော်လည်းမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါ၊ အောင်မြင်မှုလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝဟာအလွန်အမင်းသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးလုံးဝအချည်းနှီးပါပဲ။ အဘယ်အရာကိုမျှငါ့ကို phased ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်နောက်ကျကျန်ခဲ့သည့်ထိုဝတ္ထုကိုရေးသားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းပြေးချင်သောထိုမာရသွန်ပြေးပွဲအကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်ဖတ်လိုသည့်စာအုပ်များအကြောင်း၊ လူများတွေ့ဆုံရန်တိုတိုတိုတို့နှင့်ဘဝကိုတွေးမိလာသောအခါ အသက်ရှင်ပါ - ငါ fap လိမ့်မယ်။ “ ငါမနက်ဖြန်စမယ်၊ ယခုငါ fap လိမ့်မယ်။ " သင်တို့ရှိသမျှသည်သွားပုံကိုငါသိ၏။
၎င်းသည်တိုတောင်းသော၊ ချိုမြပြီးလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ နီးပါးဘာမျှခံစားရတယ်။ ငယ်ငယ်ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့မြို့မှာကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့တယ်၊ ရံဖန်ရံခါကျွန်ုပ်သည် (အလုပ်ပြုတ်ခြင်းမခံရရန်ကျွန်ုပ်၏အဖြစ်အပျက်များစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ) စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း (သို့) လုံးလုံးလျားလျားကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်မကြာခဏဆိုသလိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးခံစားရလေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတစ်စိမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ အရာအားလုံး fapping နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငါ့ကိုပျင်း။ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကလိင်တစ်ခါတစ်ရံ fapping ထက်ယုတ်ညံ့တယ်။ ”
ပထမဦးဆုံးအကောင်လေး: "အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကကျွန်ုပ်အားစိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်စွမ်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဆယ်ရက်လောက်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးအစောပိုင်းထုံးစံအတိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာတွင်ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးငိုခဲ့ရသည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာငိုခဲ့တယ် - ဂီတကိုနားထောင်ရင်း၊ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖတ်နေစဉ်၊ ငါ့ဘဝရှိလူများကိုစဉ်းစားစဉ်၊ လှပသောအတွေးအခေါ်များပင်လျှင်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်။ ဒီလိုမျိုးအရင်တုန်းကမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ငါမှတ်မိနေသမျှကာလပတ်လုံးငါဝမျးနညျးပူဆှေးခဲ့သညျ။
အချို့သောအရာများသည်ကျွန်ုပ်နေထိုင်သောမီးခိုးမြူများကိုဖြတ်ကျော်နိုင်လောက်အောင်စွမ်းအားကြီးသော်လည်း၊ ငါမသက်မသာထုံခဲ့သည်။ ဒါကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်တာငါကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပိုပြီးလေးနက်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေထဲကတစ်ခုပါ။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ sensitivity သည်မကြာခဏဆိုသလိုတီထွင်ဖန်တီးမှုများစွာပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့သည်။ သင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရတာဟာတကယ်ကိုအကျိုးရှိပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်အားဖြည့်ပေးတယ်။ ငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့လေးလကထက်ပိုပြီးတေးဂီတကိုရေးခဲ့ပြီးပြီ၊ လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်ကထက်ပိုပြီးများတယ်။ ”
တတိယကောင်လေး: "ငါ porn ကြည့်နေစဉ်, ငါအလွန်ထိရောက်မှုလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလုပ်၊ မိသားစု၊ ကြွေးမြီ၊ အမျိုးသမီးများ၏ခံစားချက်များ၊ ကလေးမွေးမြူခြင်းအလားအလာ (ကျွန်ုပ်သည်ရယ်စရာဖြစ်ပုံရသည် - အဘယ်ကြောင့်ကလေးတစ်ယောက်ရလိုသနည်း) နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါအချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်မပေးခဲ့ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏အန္တရာယ်များ၊ မဲပေးခြင်းနှင့်နိုင်ငံရေး၊ ကျွန်ုပ်၏ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်း၊ မျိုးချစ်စိတ်။ ဆိုလိုတာက Reddit ပို့စ်များကိုကြာရှည်စွာရေးသားနိုင်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ရာသည်အမှားအမှန်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ ဒါပေမယ့်အရေးယူတဲ့အခါငါသေပြီ။
အကယ်၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောလူ ဦး ရေအချိုးအစားသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအနေဖြင့်အလွန်ကြီးမားသောဒုက္ခရောက်နေသည်။ ခဲအဆိပ်သင့်မှု၏သိမ်မွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ရောမအင်ပါယာပြိုလဲသွားသည်ဟူသောသမိုင်းဆိုင်ရာဒဏ္myာရီတစ်ခုမှာသူတို့၏အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်ခဲပိုက်နည်းပညာအသစ်၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ ဤသည်မှန်သည်ဖြစ်စေမသည်ဤအချက်နှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ သက်ဆိုင်သည့်အချက်မှာယနေ့ခေတ်ကွန်ပျူတာမော်နီတာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကအိမ်တိုင်းနှင့်အိပ်ခန်းတိုင်းသို့အင်တာနက်ကို ဦး နှောက်ထဲသို့ထိုးသွင်းလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ”
တိုတိုပြောရရင်အကယ်၍ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်မိမိတို့၏ ဦး နှောက်ကိုအလွန်အကျွံတွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုအမှတ်မထင်လွင့်မျောနေစေလျှင်၊ ၎င်းသည်ပိုမိုသိသောရွေးချယ်မှုများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အချိန်မီစမ်းသပ်မှုအချို့ကိုလည်းအားပေးလိမ့်မည်။ ဘဝသည်ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောဆိုင်ရာ“ သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်” အပေါ်မည်သို့မည်ပုံကြည့်ရှုရန်လူတစ် ဦး သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုလအနည်းငယ်ကြာအောင်စွန့်လွှတ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကြည့်ပါ "ပိုပြီးတက်ကြွစိတ်ခံစားမှုအဘို့ပြင်ဆင်ပါ။ "
အခြားသူမည်သူမဆို NoFap ပေါ်ပထမဦးဆုံးအရက်အနည်းငယ်နှင့်တူခံစားမိထားတဲ့စိတ်ခံစားမှု detox တူသနည်း
ကျွန်ုပ်သည်ငါးရက်မြောက်သောနေ့၌ဖြစ်သည် (အိုအိုမဟုတ်ပါ)၊ သင် PMO မရေတွက်လျှင်သုံးရက်မြောက်နေ့။ ငါအခုအချိန်မှာ fapping ကဲ့သို့မခံစားရဘူးနေစဉ်, ဟောင်းစိတ်ခံစားမှုပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ ငါအထီးကျန်ခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းခံစားချက်တွေကိုငါကိုင်တွယ်နေတယ်၊ ​​အဲဒါကအရမ်းနာကျင်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ငါသူတို့ကိုငါရင်ဆိုင်ရမယ်။ ဖိနှိပ်ခံရသည့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအမှတ်တရများကိုအမှတ်ရနေခြင်းယခုကျွန်ုပ်သည်သူတို့နှင့်တစ်ချိန်တည်းလုံးလုံးဆက်ဆံရန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်နာကျင်ပါသည်။ အခုငါ့စိတ်ထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိနေတယ်။ အဟောင်းကိုငါကဒီလွဲချော်ဟုပြောသည်ဟောင်း, ကဆက်ဆံရေးလိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုအတွက် spartan ဒါဟာရိုးရှင်းစွာမမှန်ပါဘူးသိတယ်။
ကိုယ့် 11 / 12 ခဲ့ကတည်းကတစ်ခါတစ်ရံကိုယ့်ကိုတကယ်ငိုချင်ခဲ့တယ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ငါအလွန်အကျွံမှိုင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကို PMO နှင့်ဂိမ်းတွေကကအသုံးပြုခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ကိုမြည်းဟစ်အော်စေရန်ကျွန်ုပ်ကိုအလန့်တကြားဖြစ်စေသောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာကျွန်ုပ်အသက် ၁၈ နှစ်တွင်အဖိုးဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမတိုင်မီကကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘယ်တော့မျှမငိုခဲ့ပါ။
အခုတော့ငါ pmo မှထွက်သွားပြီးနောက်အရာအားလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ကြွလာ, ငါစူပါစိတ်ခံစားမှုမိပါတယ်။ မနေ့ကငါခွေးဟောင်းသေဆုံးနေပြီဆိုတဲ့ post ကိုဖတ်ပြီး ၄၅ မိနစ်အကြာမှာငါ့သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေအကြောင်းတွေးမိတယ်။
အဲဒါဆိုးလား ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးဟာပြိုကွဲသွားသလိုခံစားရတယ်ဆိုတာဘာမှမခံစားရတာထက်ပိုကောင်းတယ်။
နောက်ထပ်ကောင်လေး: “ (နေ့ ၉၀) ကျွန်ုပ်မှာအသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီး ၁၅ နှစ် PMO အလေ့အထရှိတယ်။ ခွဲနေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ED ကကျွန်တော့်ဘက်ကနေ ED၊ ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အရမ်းခက်ခဲတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုပြissuesနာတွေဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့ ၃၅ လောက်မှာတစ်ညတည်းမှာပဲငါဟာငါ့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းသူနဲ့လိင်ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မရဲ့ ED ပြproblemနာကအများကြီးပိုကောင်းတယ်၊ ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကထက်စိတ်ခံစားမှုပိုများတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်။
ကျွန်မရဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေအားလုံးဟာပိုပြီးအရည်ပျော်လာပြီးလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတာတိုက်ရိုက်အကျိုးကျေးဇူးခံစားရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ထိတွေ့ရလွယ်ကူတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်လို့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ပထမ ဦး ဆုံးအရာ၌သူကအလုပ်လုပ်ခဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက် [ဆေးလိပ်ဖြတ်] ငါ့ကိုနှစ်ပေါင်းငါဖြစ်ခဲ့ဘူးသောစိတ်ခံစားမှုထုံပြည်နယ်မှငါ့ကိုပြောင်းရွှေ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ၇၅ ရက်မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့မွေးနေ့ပါတီမှာမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ သူကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးမကြာသေးခင်ကမှကွာရှင်းပြတ်စဲသူလည်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုသိပ်မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကင်းမဲ့ခြင်းကိုမခံစားခဲ့ရဘူး။ ငါ့အသားအရေပေါ်မှာကျေနပ်နေတယ်။ ကျွန်မရဲ့အခြေအနေနဲ့သူမအပေါ်ထားတဲ့ခံစားချက်တွေအကြောင်းပြောဆိုနိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်လို့လည်းခံစားခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကထူးဆန်းလို့ထင်ရပေမယ့်ကျွန်တော့်ကိုကြားနိုင်ပါတယ်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲလမ်းကတည်းကငါခံစားချက်တွေကိုနှိမ်နင်းခဲ့တယ်။ အရာအားလုံးပဲ kinda ပြားချပ်ချပ်သို့မဟုတ်မြုံခံစားရတယ်။ ငါတကယ်စစ်မှန်တဲ့ရွှင်လန်းမှုကိုခံစားဖို့တကယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရှိခဲ့တယ်, ဒါမှမဟုတ်တကယ်တော့တစ်ခုခုအကြောင်းကိုဝမ်းနည်းဖြစ်ခြင်း။ ငါ porn ဒီအကြောင်းပြချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိတော့သောကြောင့်ယခင်ကလိုမလိုအပ်တော့ပါ။ ဒါကအစကတည်းကငါဝမ်းနည်းရုပ်ရှင်တွေကြည့်တဲ့အခါငါငိုတော့သည်။ သတိရပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေစဉ်တစ်ခါမှမငိုခဲ့ပါ။ ဒါဟာတော်တော်လေးထူးဆန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဝမ်းနည်းမိလို့ပျော်ရွှင်မိတယ်။
နောက်တဖန်စိတ်ခံစားမှုခံစားရနိုင်ဖြစ်ခြင်း pornfree ဖြစ်ခြင်းများစွာသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ငါသည်ဤခံစားရတယ်။ ဒါဟာလိုက်တယ်အရာပါပဲ။ အကြှနျုပျ၏ခွေးလွန်ခဲ့တဲ့2လခနျ့ lymphoma ရောဂါကိုတယ်နဲ့ကျွန်မစိတ်ဆိုးခဲ့စဉ်ခဏ, ငါတကယ်ကအကြောင်းဟစျကျွောလေ၏ဘူး။ ငါမကြာသေးမီကနုတ်ထွက်အစဉ်အဆက်ကတည်းကကိုယ့်အကြောင်းကိုငိုပြီ။ ဒါဟာငါယခုထက်ပိုသောစိတ်ခံစားမှုပေါ့, လိုက်တယ်ပါပဲ။ ကိုယ့်လဲလျောင်းသူ့ကိုမှာရှာဖွေနေငါ့ကို fuck ဆိုတဲ့ငိုကြွေးစေသည်။
sstsebiggestfan [ဤအသုံးပြုသူသည်သူတို့၏အကောင့်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ဖျက်ခဲ့သည်]
ဝမ်းနည်းစရာရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါအလွယ်တကူသတိရတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာဇာတ်ကားတွေမှာငါအရမ်းငိုခဲ့ရတယ်၊ ဒါကရှက်စရာပဲ။
သူတို့အား placating dopamine hits သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကများမှာတစ်ချိန်ကစိတ်ခံစားမှုသိပ်အားကောင်းနှင့်ပိုပြီးမှန်ကန်လာကြ၏။
၀ မ်းသာပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ပြီးအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ မင်းကသတိမထားမိဘဲ…ငါဟာညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းတယ်၊ ငါ့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိနေပုံရတယ်။ ငါထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်ရရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါကတခြားလူရဲ့အောင်ပွဲအပေါ်မကျေနပ်မှုဖြစ်ခြင်းပဲမှန်းဆ! ကောင်းပါပြီ
ငါ porn အတွက်နက်ရှိုင်းသောအခါကိုယ့်စိတ်ခံစားမှုအကင်းမဲ့သလိုခံစားရတယ်, သငျသညျအကွောငျးကိုစကားပြောနေကြသည်အတိအကျဘာကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ Btw သောအရာကိုနေ့၌သင်တို့အားငါမှာ?
ကျွန်တော့်ဘ ၀ မှာအရာရာကိုလက်ခံဖို့ကျွန်ုပ်အားဘယ်တုန်းကမှမသင့်၏
ကျွန်ုပ်၏စိတ် (alarm) စနစ်ကိုညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများဖြင့်ရေတွက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤခံစားချက်များကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ငရဲကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ထိုအချိန်တွင်လုပ်နေသည်ထက်ကွဲပြားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အခွင့်အရေးယူခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေမည်းနေအောင်လုပ်နေတုန်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ပြီးစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်မနေခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဘဝ၏ထိုကာလသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းကိုအမှန်တကယ်ပျက်ပြားစေခဲ့သည် ကျေနပ်ရောင့်ရဲတဲ့ဘဝအသက်တာအတွက်ကျွန်တော့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပျက်ပြားလုနီးပါးဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ယခုမှသာကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းကျင့်သုံးနေသောမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းမှမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့နေ့စဉ်ဘ ၀ တွေဘယ်လောက်ငါ့ရှေ့ကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုငါနက်နက်နဲနဲသတိထားမိပြီးအဲ့ဒါကိုငါတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ ထိုအခါငါသည်ဤအဖိုးထိုက်သောအချိန်ကုန်ဆုံးသောအချိန်ကုန်ဆုံးသောအချိန်ကုန်ဆုံးသောအချိန်ကာလကိုအချည်းနှီးဖြစ်စေသည်မဟုတ်ပါ။
ဒီနေ့ငါအကူအညီလိုအပျသောငါ့သူငယ်ချင်း၏တာဝန် (စာစီစာကုံး၏ပိုမို) ကိုငါရေးသားခဲ့သည်။ ငါရေးနေတုန်းမှာငါတည်ရှိနေတာကိုငါမသိတဲ့စကားလုံးတွေထဲကလာတာငါခံစားရတယ်။ ငါစာစီစာကုံးမျှသာရေးနေစဉ်ငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတင်လိုက်ပြီး၎င်းသည်တစ်နာရီအတွင်းအားလုံးကျေနပ်အားရသည့်ဤအနုပညာလက်ရာသို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုအံ့သြမိသည်။
ငါမတိုင်မီဒီလိုလုပ်လို့မရဘူး။ အကြောင်းကတော့ငါစိတ်ကူးတွေနဲ့အိပ်မက်တွေကပိုပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာပြီးပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်။ NoFap ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့ဘ ၀ ပြောင်းလဲသွားပြီ။ ခင်ဗျားကအဲဒါဟာသိပ်မများလှတဲ့ပမာဏလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီသေးငယ်တဲ့ခြားနားချက်ကအများကြီးပိုတန်ဖိုးရှိစေသည်။ အခုကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံကိုကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်ပါတယ် အိပ်ရာပေါ်မှာလဲလျောင်းနေမယ့်အစားငါပြေးပြေးထွက်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်လုပ်ပါ။
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "ငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပိုပြီးကိုက်ညီတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့အထိခိုက်မခံတဲ့ဘက်ကိုဖုံးကွယ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာများအကြောင်းဖွင့်ဟ။ လူများကို ၀ င်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်ပုန်းနေသည့်အရာအားလုံး၌အားနည်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြီးမားသောပြissueနာဖြစ်သည်။ အခုတော့အဲဒါကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြီးပြီ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ငါ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာတွေ၊ ငါဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့စကားပြောဖို့မလွယ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေကိုသိရှိပြီး၎င်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ သငျသညျကိုပယ်ဖြတ်သောကောင်လေးမှာချွတ် Pissed? အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ သင်၏ဘ ၀ ၌ကောင်းသောအရာများကိုတန်ဖိုးထားပါ။
ငါအဖြစ်ကောင်းစွာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြအကြောင်းကိုအများကြီးပိုပြီးပွင့်လင်းဖြစ်၏။ တကယ်ပျော်လား ထွက်ခွင့်ပေးပါ မနက်ဖြန်မရှိဘူးလိုရယ်၊ ကျန်တဲ့လူတိုင်းကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါ။ ငါတစ်ခုခုအတွက်တကယ်ပျော်ရွှင်မိပြီးဖုံးကွယ်ထားရသလိုခံစားရတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်ပါကအားနည်းချက်ရှိနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? မပြောတတ်ဘူး။ အခြားသူများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုသည်သင်၏အကောင်းဆုံးခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါချစ်ခင်တွယ်တာမှုကိုငြင်းပယ်လေ့ရှိရာယခုငါအလိုရှိသည်။ လူတွေကိုငါမမောင်းတော့ဘူး။ သူတို့ကိုငါပိုပြီးနီးကပ်စေချင်တယ်။
ဒီတော့ pmo ကြောင့်တစ်ဦးထုံဖုတ်ကောင်ဖြစ်ခြင်းဖို့အသုံးပြုထားကြောင်း, တဖန်စိတ်ခံစားမှု feeling အနည်းဆုံးပြောနည်းနည်းလွှမ်းမိုးသောဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အေးဆေးငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ခဲ့ကြောင်းငယ်လေးတစ်အိုင်ကစားသောက်ဆိုင်မှသူမ၏ထွက်ကိုဖိတ်ကြား, သူမ၏ 75th မွေးနေ့ဆင်နွှဲဖို့ငါ့အဘွားမှာဒီတနင်္ဂနွေနှင့်တကယ့်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ကစဉ်းစားပြီးအလွန်ပျော်ရွှင်သလိုခံစားရတယ်။
ထိုအခါကိုယ့်အိမ်ပြန်ငါ၏အလမ်းပေါ်တွင်ရထားပေါ်တွင် Podcast တခုကိုမှနားထောင်ပြီးကိုယ့်ဇာတ်လမ်းသို့ soo နက်ရှိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နီးပါးတက် teared ။
အိုကေ၊ မင်းအတွက်မင်းအတွက် ၆၉ ရက်မြောက်ပုံပြင်ရှိတယ်။ ဒီဟာကမင်းရဲ့အရာမဟုတ်ဘူး၊ ငါမင်းထက်နည်းနည်းကြီးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။
NoFap ငါ၏အစိတ်ခံစားမှုမစတင်မီပိတ်ထားခဲ့သည်။ ငါအရာအားလုံးကိုခံစားခဲ့ရပေမယ့်အားလုံးမောနှင့်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်။ 30 ရက်ပေါင်းမှာတစ်ခါတလေသူတို့ overpowering ခဲ့ကြသည်ပေမယ့်သူတို့ကိုငါကိုင်တွယ်ရန်သင်ယူသည်စိတ်ခံစားမှုကိုတကယ်ခိုင်မာတဲ့ခံစားရတယ်။ ငါသမြှသောကရှိခဲ့ပါသည်ကြီးထင်။
ယနေ့ငါငါကနှစ်ခု၌ငါ့ကိုကိုက်ဖြတ်မယ်လို့ထင်နိုင်အောင်ခိုင်မာတဲ့ခဲ့တာငါ့မိသားစုကိုခစျြ၏ခံစားချက်နှင့်အတူ hit ခဲ့သည်။ ဒါခိုင်မာတဲ့ခဲ့ပေမယ့်အကောင်းတစ်ဦးခံစားချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ PMO ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါထင်တာကတော့သူတို့ဟာပိုပြီးအားကောင်းလာနိုင်တယ်။ ဒါကစူပါပါဝါမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကသာမန်လူ့စိတ်ခံစားမှုပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခါမှမခံစားခဲ့ဖူးဘူး။ အမျိုးသားတစ် ဦး / အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုမည်သို့သောစိတ်ခံစားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုမည်သူသိသနည်း။ ထွက်ရှာရန်တစ်လမ်းတည်း။
ငါ NoFap လုပ်နေတာနေချိန်မှာငါအများကြီးပိုစိတ်ခံစားမှုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ရယ်များကဲ့သို့ခံစားမိ, ငါ NoFap မပါဘဲဂရုစိုက်မပေးပါဘူးမယ်လို့အမှုအရာဂရုစိုက်။ ဒီသာမန်ဖြစ်သနည်း
ဟုတ်ပြီ၊ သင် dofamine receptors ကိုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရာဝတ္ထုတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူခံစားမိစေပြီးဝမ်းနည်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုစသည်တို့ကိုယေဘူယျအားဖြင့်ခံစားချက်တွေအပေါ်မူတည်တယ်။ ဒါဟာ ဦး နှောက်မြူသန့်ရှင်းရေးနဲ့အတူတူပဲ
ငါ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ nofap အပေါ်င့်သောအခါငါကပိုကလူဂရုစိုက်ကြပါ, ဒါပေမယ့်တူညီမှာငါ "ဟု fuck ဆိုတဲ့မပေးပါဘူး" သဘောထားကိုရှိသည်, ပြောပါလိမ့်မယ်။ စုံလင်သောဥပမာလိုပဲ, ကိုယ့်ကိုပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကခဲ့သောငါ၏ဟောင်း, မီတာနဲ့ငါ့ကြားဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်, ငါမရှိ, ဝမ်းနည်းမှုသို့မဟုတ်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရသည်။ ယခုတိုင်အောင်ငါနေဆဲငါလွှတ် fapping ခံခဲ့ရလျှင်အဖြစ်နေ့စဉ်ငါတောင်းပန်ပါတယ်မြည်းကို dude တူသောငိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သတ်သေစဉ်းစားရမည်တဲ့သူကပြောတယ်, မပေးပါဘူး။
မင်းကငါ shit up လုပ်နေတာ၊ ငါဂရုမစိုက်ဘူး
မြို့လယ်ခေါင်မှာလမ်းလျှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် (ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဖြစ်လေ့မရှိဘူး၊ ငါကလူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရင်မှမဟုတ်ရင်) အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းထိုင်တာထက်တစ်စုံတစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်။
အဖြစ်မကြာမီငါအပြင်ဘက်သို့ သွား. အဖြစ်ငါရပ်ကွက်အတွင်းကနေနှစ်ခုမိန်းကလေးငယ်များကိုမြင်တော်မူ၏။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးကိုငါအတူတူလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုငေးစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားလာတာနဲ့အမျှသူမဟာငါ့မျက်စိမှာစိုက်ကြည့်နှင့်အသိငါ့ဦးခေါင်းသည် (မငါ့ကိုငါ့ဦးခေါင်းသည်) ဆက်လက်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကြာကြာတစ်စက္ကန့်များအတွက်မျက်လုံးချင်းကိုင်ထားနိုင်လှည့်။
ok, ဒါဝေးသာမန်ထဲကဘာမျှမ။ အဆိုပါလိုက်တယ်ပစ္စည်းပစ္စယကစတင်ခဲ့သည်ဘယ်မှာဤတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါလမ်းများဆင်းလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ငါသည်ငါ့လက်ချောင်းထိပ်ပေါ်အနည်းငယ်ဉျြးဖဉျြးအာရုံခံစားခဲ့ရသည်။ လျှပ်စစ် Impulses သတင်းပို့လိုပဲ။ ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာတကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်မတိုင်မီသော်လည်းမဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်မိန်းမနှင့်မျက်လုံးချင်းကိုင်ထားခဲ့သည်ပေမယ့်ငါပြီးသားငါလုပျနိုငျသိတယ်။ ပိုမိုငါခံစားရတယ်ပိုမိုဖြေလျော့ပေးခြင်းသွားလာ၏။
ငါ (ကျွန်တော်ကဖေးများနှင့် whatnot နှင့်ပြည့်စုံရုံလမ်းသွားလမ်းလာများအတွက်ကြောင်းဤနေရာတွင်ကြီးမားတဲ့တဦးတည်းရှိသည်) အဓိကလမ်းထဲသို့ဝင်အဖြစ်ကငါ့ကိုနှိပ်ပါ။ ငါမြင်နေရတယ် အားလုံး။ ကျွန်ုပ်၏အမြင်အာရုံသည်အစဉ်အမြဲမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏အာရုံအားလုံးသည်ထက်မြက်နေပြီးအာရုံခံသတင်းအချက်အလက်ပမာဏမှာအလွန်များပြားနေသည်။ ငါဟာငါ့ခေါင်းထဲမှာနေပြီးငါစိတ်မချရတဲ့အတွက်ငါဒါကိုအသုံးမပြုခဲ့ဘူး။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအထူးဂရုမပြုမိပါ။ ဒါဟာလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
များသောအားဖြင့်ဒီလမ်းပေါ်မှာငါလမ်းလျှောက်တဲ့အခါငါနှစ်ဖက်စလုံးကိုသွားတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေအရမ်းများတာကြောင့်မင်းကအမြဲတမ်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆုံမိလေ့ရှိတယ်။ မဟုတ်ပါ၊ ဤအချိန်မဟုတ်ပါ။ ငါ fuck ဆိုတဲ့စင်တာ၌လက်ျာဘက်သွားလာ၏။ ငါအံ့သြလောက်အောင်ယုံကြည်မှုနှင့်စိတ်အေးလက်အေးခံစားရတယ်။ ကိုယ့်ခြေထောက်တွေသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည်နူးစေပါ။ ကျွန်တော့်ပတ် ၀ န်းကျင်မှာဒီaရာမစွမ်းအင် aura ရှိသလိုလူတွေသတိထားမိလာသည်။ ငါသည်လည်းမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားများထံမှကြည့်နေသည်။ သူတို့ကတကယ်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည့်အချိန်အများစုကိုကျွန်ုပ်အတွက်လမ်းခင်းပေးလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ဘဝမှာလူတွေကိုတကယ်ခံစားခဲ့ရတာပထမဆုံးအကြိမ်လို့ထင်ပါတယ်။ ငါသည်သူတို့၏စိတ်ဓါတ်များ, စွမ်းအင်, Vibe ခံစားရတယ်။ သန့်ရှင်းသောအ shit ။
စိတ်ဖိစီးမှုပျောက်ကုန်ပြီ။ Autopilot ။
အခုငါအိမ်ပြန်လာပြီ၊ ငါအိုးကိုဆေးလိပ်သောက်သည့်အခါမှလွဲ။ ငါအကြောက်လွန်ရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ အချိန်ကိုအတိုင်ဖွင့်ပြီးသင်အချိန်လေးအကြားတွင်ခုန်သည်။ အခုတော့အရာရာဟာသမုဒ္ဒရာထဲကကောင်းတဲ့သင်္ဘောလိုပဲချောချောမွေ့မွေ့ကူးပြောင်းနေပြီ။
ငါလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်စုံတွဲများအတွက်အများကြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဤကဲ့သို့သောဘာမှထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပျက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ရုံအပြာရောင်ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ ယခု NoFap ရှိလူအချို့သည်၎င်းကိုတစ်ခါမျှကြုံတွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ၊ အချို့သည်လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်နေနိုင်သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်ပြောသောအခါကျွန်ုပ်လုံးဝအလေးအနက်ထားသည် ဤသည်။ Shit ။ ဖြစ်ပါတယ်။ ရီးရဲလ်။
"သင်ပျော်ရွှင်ပုံရသည်။ " “ ဘာလို့ငါတို့ဘာကြောင့်ကွဲတာလဲ”
ဒီတော့ငါအံ့သြစရာကောင်းတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေရှိခဲ့တယ်၊ အဲဒါအတွက်အတွက် NoFap ကိုငါကျေးဇူးတင်တယ်။ ငါအရမ်းပျော်တယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကထက်ထွက်သွားတယ်၊ ၁၈ လပဲရှိသေးတယ်။
သောကြာနေ့ညကျောင်းမှသူငယ်ချင်းအိမ်သို့သွားပြီးသူငယ်ချင်းအချို့နှင့်အတူဘားဆိုင်သို့ထွက်သွားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်ခန့်ကသူမနှင့်အတူရှိနေခဲ့သောအိမ်နီးချင်းထံမှစီးရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဖမ်းပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမနက် ၂-၄ နာရီလောက်မှာရပ်ကွက်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တော့အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ငါနောက်ကျ ppl န်းကျင်ဤမျှလောက်ပိုပြီးအဆင်ပြေခံစားခဲ့ကြရတယ်။
နောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏စာဟောင်းများစာပို့ခဲ့ကြပြီးသူမသည်ညမတိုင်မီနှင့်စာသားများမှတစ်ဆင့်စူပါ flirty ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမက“ ငါတို့ဘာကြောင့်ကွဲတာလဲ” ဟူ၍ ပင်စာပို့ခဲ့သည်။ ငါတကယ်ထင်ထားတဲ့အသစ်သောယုံကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီနေ့မှာပဲအမေနဲ့စကားပြောပြီးနာရီအတော်ကြာစကားပြောခဲ့တယ်။ သူနဲ့သူမတကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိနိုင်တယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါသူ့အခန်းထဲမှာထိုင်လျက်, (ငါလိုချင်ပေမယ့်) ငါ့မိသားစုနှင့်အတူချိတ်ဆွဲခဲသောသူငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဦး နှောက်မြူမှုန်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူမသည်“ မင်းပျော်နေပုံရတယ်” ဟုပြောခဲ့သည်။ ပြီးတော့ငါကပြောခဲ့တယ်
ငါတကယ်သော်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မြင့်မားသော dopamine အတုတွင်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကကျွန်တော်တကယ်ပျော်ခဲ့တယ်၊ အထီးကျန်မှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုတကယ်တမ်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာကိုငါခန့်မှန်းနေတယ်။ ငါရေချိုးခန်းထဲရောက်တော့အမေ့ပြောတာကိုပဲတွေးပြီးဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်သည်။ ဒါကငါဟာပျော်ရွှင်မှုကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရေလျှံရုံကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုနေ့, မနေ့ကငါအများကြီးနှင့်အတူစာရိုက်ခဲ့ကြသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူထွက်သွားလေ၏။ ငါတို့စားသောက်ဖို့ထွက်သွားတော့ငါသူမကိုပစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျွန်မဖက်လိုက်ပြီးနမ်းလိုက်တယ်။ ဒါကတစ်နှစ်နီးပါးလောက်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုနမ်းခဲ့တာပထမဆုံးအကြိမ်ပါ။ ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်ငါ့ရဲ့ ED ပြofနာကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေဖို့အရမ်းကြောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သိပ်မကောင်းပေမယ့်ပိုကောင်းလာပြီလို့ငါပြောနိုင်တယ်။
ငါပြန်လုပ်ဖို့မစီစဉ်ပါဘူး ငါကြိုးစားကြည့်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခဲ့တယ်။ လာမယ့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေကျောင်းမှာသူမလာလည်မယ်။ ငါ ED ရရင်တောင်အတိတ်ကလိုစကားမပြောနိုင်တဲ့ဆင်ခြေပေးမယ့်အစား၊ ပြherနာကဘာလဲဆိုတာသူမတကယ်ကိုပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ် .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် , နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါအဘို့အဖို့မျှော်လင့်အတိုင်းဤတနင်္ဂနွေငါ့ဇာတ်လမ်းကိုမျှော်လင့်, အစဉ်အဆက်, မသွားကိုစောင့်ရှောက်ရန်သင်တို့တွင်အချို့သောလှုံ့ဆျောပေးနိုငျမျှော်လင့်ပါတယ်! အရမ်းရယ်ရတယ်ဒီအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အထဲတွင်လူတိုင်းအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဆက်လက်ပြီးရှိသည်!
နေ့ ၉ စောင့်ကြည့်ခြင်း - ကျွန်ုပ်၌စိတ်လှုပ်ရှားမှုများရှိသည်…
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း fapping တစ်နတ်သမီးပုံပြင်ရှည် Streak စဉ်အတွင်း, ငါသည်ဘာမျှအစဉ်အဆက်ငါနှစ်သက်သောသို့မဟုတ်ငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေသလိုပဲသဘောပေါက်လာတယ်။
သို့သော်9ရက်ပေါင်း nofap သို့ငါ fapping အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု numbing အတွေ့အကြုံကိုကြောင်းကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ များသောအားဖြင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုဆောင် ခဲ့. အရာအသံတိတ်သို့မဟုတ်အသတ်ခံနေကြသည်။
ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသိသိသာသာတိုးများလာသည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအဖော်ပြုခြင်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်။ အစားအစာသည်အရသာပိုကောင်းသည်၊ အမျိုးသမီးများကသူတို့ထက်အရင်လှပသည်၊ ဂီတသည်ကျွန်ုပ်၏နားများကို ပို၍ ပင်အသံမြည်သည်။
သို့သော်အပေါင်းတို့၏အများဆုံး, ငါသည်နောက်တဖန်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားချက်တိုးမြှင့်, ငါခက်ခဲရယ်မောနေသည်။ အရာအားလုံးကရန်အသုံးပြုသည်ထက်တစ်စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုပိုမိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တိုတိုမှာတော့ကျွန်မယခုငါဖြစ်သင့်သောသူကဲ့သို့ခံစားရရန်စတင်နေပါတယ်။ အဲဒီအစားတသမတ်တည်း pmo အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကာဗလာ, စိတ်ခံစားမှုအကင်းမဲ့ shell ကိုထက်။
ငါသည်ဤစူပါခက်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမရက်သတ္တပတ်ကုန်လွန်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ရယ်သံသည်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ငါသည်လည်းနှစ်ကြိမ်ငိုခဲ့ရသည်၊ အဆိုပါခံစားချက်များကိုအချို့သောထွက်ပေါက်လိုအပ်ပါတယ်။
ငါအခုအချိန်မှာငါခံစားရပုံကိုmatchesုံကိုက်ညီ။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသစ္စာဉာဏ်အလင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။
သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ငါ fapping လည်းမှိုင်းဖြစ်လာသည်ခံစားရတယ်။
ငါ nofap နဲ့စတင်ကတည်းကငါသတိထားမိထားသောအရာတစျခုကြှနျတေျာ့အိပ်မက်တွေကိုပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံသာမန်အိပ်မက်တွေပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းဘာမျှမ ..
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်အတွင်းငါရူးနေသလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ငါအိပ်မက်တစ်ခုတည်းဒါမှမဟုတ်အနည်းငယ်လောက်သာမရှိဘူး။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်မှတ်မိနိုင်သည့်အိပ်မက်များစွာရှိသည်။
နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ ၁၀ နှစ်အတွင်းပြင်းထန်သော fapping နှင့် porn စောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်မဖျားနာခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာသင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရကောင်းထင်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါအမှန်တရားပဲ။ ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ငါနေ့တိုင်းတခြားသူတွေလိုအိမ်မှထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်ပြင်းထန်သောပုံများစတင်ခြင်း (အစကတည်းကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဘယ်တော့မှချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိ) ကတည်းကအစာအိမ်ထဲမှာလိပ်ပြာတွေမခံစားရဘူး။ အဆုံးစွန်သောမိန်းကလေးများသည်စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်း၏အကျိုးဆက်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲ၊
အခြားသူ၌တူညီသော 'ထူးဆန်း' သောအတွေ့အကြုံမျိုးရှိပါသလား။
မင်းဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာငါသိတယ် ငါစစကတည်းကငါအစာအိမ်ထဲရှိလိပ်ပြာများသည်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းမှကင်းဝေးကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ဒါပေမယ့်စိုးရိမ်ပူပန်ဘူး, ငါအာရုံကြောနှင့်အတူဤကျော်ရရန်စောင့်ဆိုင်းလို့မရပါဘူး, စိတ်လှုပ်ရှား cant လိပ်ပြာအာရုံကြော။ မင်းကမင်းကိုဘယ်လိုခံစားရစေမလဲ၊
ငါ 10 နှစ်အတွင်းပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အကခုန် ... Wow! PMO တကယ်ငါ့ကိုဖုတ်ကောင်လုပ်ခဲ့တယ်။
ငါသည်ငါ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာမေးပွဲများအတွက်လေ့လာနေစဉ်အချို့ဂီတကစားရုံတက်ရဒါငါလုပ်ခဲ့တယ်ကြောင့်ဤမျှကောင်းသောခံစားခဲ့ရကခုန်ဖို့တိုက်တွန်းခံစားခဲ့ရခဲ့သည်။ ကခုန်နေချိန်မှာငါကခုန်ငါသည်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာဝယ်မှီ, ကောလိပ်မှပယ်ရှားပြောင်းရွေ့နှင့် PMO ရှာဖွေတွေ့ရှိအကြောင်းကို 10 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းခဲ့စဉ်ကနောက်ဆုံးအချိန်ငါသည်ဤလမ်းခံစားခဲ့ရကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။
ကျွန်ုပ်ရက်စွဲ ၉၀ တွင်ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်ကြောင်းအပြည့်အစုံပြောပြရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်သင့်ရပ်ကွက်ရှိအသင်းသားအားလုံးသည်သင့်အားရက်ပေါင်း ၁၀၀၀ (သို့) ၁ ရက်ရှိမရှိသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြန်လည်ရရှိစေရန်ကူညီပေးနေသည်ကိုယခုအချိန်တွင်သာသိရပါမည်။ သင်တို့ရှိသမျှကိုငါအကြွင်းမဲ့လေးစားပါတယ် NoFap ကိုတွေ့တာအရမ်းဝမ်းသာပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အရမ်းကောင်းတယ် ငါနှစ်ပေါင်းများစွာကခံစားခဲ့ရဘူး။ Nofap ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝကိုခရမ်းရောင်မျက်မှန်မရှိဘဲကြည့်ရှုစေပြီးအချို့အရာများကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
လူကြီးလူကောင်း, ကပိုကောင်းရပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဂီတ, စာအုပ်, ရုပ်ရှင်, သို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦးမှဖွင့်ခြင်းရှိမရှိချိတ်ဆက်မှုအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သငျသညျ, ဒီအသက်တာသစ်အသက်ရှင်နေထိုင်အဟောင်းကိုစွန့်လွှတ်ခြင်း, ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံရန်ရှိသည်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်ဘဝမှမဖယ်ရှားမီအချစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိခဲ့ပါ။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားခဲ့ရဖူးဘူး၊ အဲဒါရဲ့စွမ်းအားကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး၊ ဆိုလိုတာတွေအားလုံးကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ အချစ်ဟာလိင်နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ဆိုပြီး Porn ကသင်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး ၁ နှစ်ကြိုးစားရုန်းကန်ပြီးတဲ့နောက်အောင်မြင်မှုတချို့၊ ဆုံးရှုံးမှုအချို့ပြီးနောက်ချစ်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းတို့သည်ဘာတူညီချက်မှမရှိဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ porn သည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု၏အဓိကဥပမာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုသေစေပြီးသင့်ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီပြန်လည်ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရွေးချယ်ပါ၊
ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ ၄၅ တွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်မိသားစုကိုတောင်မှမည်သူ့ကိုမျှရှေ့တွင်ရယ်မောနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ တကယ်ရယ်စရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှရယ်မောလို့မရဘူး၊ ထိန်းမရတဲ့အပြုံးပဲ။
လွန်ခဲ့သောလကကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုရယ်မောနိုင်ခဲ့ပြီ၊ ငါလိုချင်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းမဲ့စရာမရှိဘဲအရမ်းပျော်တယ်။ အနည်းဆုံး ၂ ပတ်ကြာအောင်ပြားချပ်ချပ်တစ်ချောင်းထဲဆွဲတင်ထားသော်လည်း၎င်းသည်မရပ်တန့်သေးပါ။
နောက်ကျောကသင်၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူထိတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါငိုနီးပါးနိုငျခဲ့ porn စောင့်ကြည့်ဖို့အသုံးပြုသောအခါငါပြန်သတိရပါ။ ငါပင်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုစဉ်အတွင်းသူတို့အားခံစားချက်တွေကိုအတွက်ကိုင်ပြီးအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို prided ။ ယခုငါတကယ်နောက်တဖန်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေကြောင့်ငိုမကောင်းတဲ့င်ထင်ဘယ်မှာဒီလိုက်တယ်အရာရှိတယ်။ nah သောသူသည်ကောင်းသောခံစားရ၏။ ငါမျက်ရည်စမျက်လုံးဖြစ်လာသို့မဟုတ်ဟစျကျွောလေ၏င့်ကိုမြင်ရပါတယ်အတိတ်စုံတွဲရုပ်ရှင်တွေ။ ဒါက porn ကိုသင် desensitizing အားဖြင့်သင်တို့ထံမှခိုးယူကြောင်းကုန်ကြမ်းစိတ်ခံစားမှုပါပဲ။ သင်မသိသောအမျိုးသမီးများ၏ pixels ကိုအပေါ်ကိုချွတ်ရယူခြင်းသနားစရာဖြစ်၏ ငါအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ယူပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်တတ်နိုင်စဉ် Quit ။ သငျသညျနှငျ့အမြိုးသမီးကတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်များအတွက်ဒါဟာကောင်းပါတယ်။
porn စွဲမှပြန်လည်ထူထောင်ဝမ်းနည်းမှုနှင့်အထီးကျန်တစ်ခုကြီးမားခံစားချက် feeling ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ရှိရာသာအကြိမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အရင်တုန်းကငါဘာမှမခံစားခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်မနေ့ညနဲ့ဒီမနက်ခင်းမှာငါအရမ်းဝမ်းနည်းပြီးအထီးကျန်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့သိတာကဒါကကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။ ကျွန်မကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ပြaboutနာတွေအကြောင်းပြောပြတယ်။ သူကအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကသူမကိုသူမသည်ကလပ်တစ်ခုတွင်တွေ့ခဲ့ပြီးသူမဆီသို့သွားပြီးမင်္ဂလာပါဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူမကသူပြန်လာလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
နာကျင်သော်လည်းနာကျင်ခြင်းသည်ထုံးခြင်းထက်သာလွန်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အစာအိမ်မှတဆင့်ဟော်မုန်းများပိုမိုစီးဆင်းနေသည်ကိုကျွန်ုပ်ခံစားနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၀ မ်းမြောက်မှုခံစားချက်၊ တစ်ခါတစ်ရံနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရသော်လည်း၊
ယခုဤသည်အလွန်ယခုအချိန်တွင်ငါအရမ်းခံစားရတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်အလွန်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်နှင့်အတိတ်၏စိတ်ပျက်မိကြောင်းခံစားရတယ်။ ငါ့ကိုယ်ထရပ်ကားများကဝင်တိုက်တယ်နဲ့တူဂီတကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှိပ်ထားပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တဖန်ငါခံစားမိနိုငျပါသညျ! အဆိုပါပျော်ရွှင်မှုကိုငါ၏အဝမ်းနည်းမှုအောက်မှာခြောငျးဖြစ်ပါတယ်။ ငါငါ့အလိုရှိသမျှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားနှင့်ကြောင့်ရောက်ရှိတိုင်အောင်တဆင့်လယ်ထွန်ခြင်းကိုပါလိမ့်မယ်။ ငါကယုံကြည်!
၁၂ နှစ်ကြာ> စွဲလန်းနေသည့်> မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော> စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ လှုပ်ခြင်း / လျောက်ပတ်ခြင်း> သူနာပြု ၉၉၉ ဦး သည်အရူးစွဲခြင်း၊
ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာ၏ပြင်းထန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်လုံးဝသံသယမ ၀ င်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏မိဘအိမ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်က၎င်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ငါစိတ်လုံးဝပျောက်သွားပြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ ဒါဟာအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပြီးငါ့မှာမထိုက်မတန်သို့မဟုတ်နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်မိဘများသည်ကျွန်ုပ်သည်ဆုတ်ခွာနေကြောင်းသိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သာဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်သည်သင်၏မိသားစုထံသို့စာရေးခြင်းသို့မဟုတ်တစ်နည်းနည်းဖြင့်မိသားစုအကြောင်းပြောပြလိမ့်မည်။ ငါ့အမေငါဆုတ်ခွာ၌ရှိ၏ဤကူညီပေးခဲ့သည်သတိထားမိခဲ့သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူမပို။ ပင် freaked ကြလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလမ်းဖြင့်အပြာရောင်ထဲကလုံးဝလာ၏။ တခြားယောက်ျားတွေမှာလည်းအလားတူအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံခဲ့ရသောစိတ်ခံစားမှုများထွက်ပေါ်လာပြီးလုံးဝလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အခြေအနေဖြစ်သည်။
ရက်ပေါင်း ၆၀ အစီရင်ခံစာ - ဤအရာသည်အမှန်ပင်အထောက်အကူပြုသည်။
နောက်ဆုံးခြောက်ဆယ်ရက်အတွင်း, ပြေး, အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စကား-သမီးတွေအများကြီးမျက်ရည်တွေအများကြီးအံ့သြစရာဝမ်းမြောက်ခြင်းအချိန်လေးပါဝင်သည်ပါပြီ။
ပထမ ဦး စွာ nofap သည်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပြောင်းအလဲများစွာထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ တီဗွီ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကနေလည်းထွက်လာပြီးစားတာပိုကောင်းလာတယ်။ ငါနည်းနည်းသောက်တယ်
ခံစားချက်ကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေရန် fapping, porn, video games နှင့်စသည်တို့ကိုအလေးအနက်စဉ်းစားသည်။ ဒီအရာတွေကိုငါပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးထွက်ပေါ်လာသလိုခံစားရတယ်။ သီချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်သည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားကိုယခုချိုးဖျက်နိုင်သည်။
ဒီတံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့အားတွေအများကြီးထွက်လာတယ်။ အဲဒါဟာ ဦး နှောက်အာရုံကြောစွမ်းအင်လား၊ ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ MOVE ကိုလိုချင်တယ်။ ဒါကလေ့ကျင့်ခန်းကိုပိုပြီးလွယ်ကူစေတယ်၊ ​​လေ့ကျင့်ခန်းကကျွန်တော့်ကိုငရဲလိုပျော်ရွှင်စေတယ်။ ငါလေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည့်တရားအားထုတ်ရန်ပြန်လာခြင်းကစိတ်ကျဝေဒနာ၏မှောင်မိုက်ဝန်းကျင်အချို့တွင်ကျွန်ုပ်ကိုမဆုံးရှုံးစေခွင့်ပြုခဲ့သည်။
အဓိကအချက် - ကျွန်ုပ်နေထိုင်ပုံ၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်မည်မျှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည့်နည်းလမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်မည်မျှ ၀ မ်းသာသည်ကိုမသိခဲ့ပါ။ ရေကာတာကိုမချမချင်းငါဘာကိုင်ထားလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။
မကြာသေးမီကလူဟောင်းတစ် ဦး နှင့်ငါ့ဟောင်းနွမ်းပုံများကိုတွေ့သောအခါငါအကြိမ်များစွာငိုခဲ့သည် - ၎င်းသည်ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းကထက် ပို၍ ထိမိသည်။ ဒါပေမယ့်အိုကေပါတယ် ဘ ၀ သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားကိုကွဲစေသည်။ ငါ့ခံစားချက်တွေကိုမဖုံးကွယ်နိုင်ဘူး၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊ ဘဝရွေ့လျား။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများလာ။ သွား။ တစ်ခါတစ်ရံနှလုံးကြေကွဲခြင်းဖြစ်ခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောမှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
ငါ့ညီဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့နာကျင်မှုကငါ့ကိုဘယ်လောက်အထိနာကျင်စေခဲ့သလဲဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး။ ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကငါ့ကိုငြိတွယ်ခဲ့တယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ငါသူ့ကိုကျော်ငို, ထိုသို့သောလှပသောခံစားချက်ပါပဲ။
ပြီးခဲ့သည့်ညက 90s သီချင်းကိုငါနားထောင်ခဲ့သည်။ ကလေးဘဝတုန်းကငါကလေးဘဝကိုအမှတ်ရမိတယ်။ ဒစ္စနေး Soundtrack ကိုလည်းနားထောင်ခဲ့တယ်။ ငါသီချင်းကိုနှစ်သက်ရင်းရုတ်တရက်မျက်ရည်များကျလာသည်ကိုသတိမပြုမိဘဲ။ ကျွန်ုပ်မျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ အများကြီး ... ငါ့ကလေးဘဝက PMO မှကင်းလွတ်ခွင့်ရသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ငါသည်တနင်္ဂနွေနေ့သို့မဟုတ်တစ်ရက်သာပြန်လာနိုင်လျှင်…။
porn သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှု numbs
ကျွန်မမကြာခဏ porn ကိုကြည့်လိုက်သောအခါကျွန်မစိတ်ခံစားမှု, ငါသည်အတွင်း၌သေ, ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုမျှသောဤတောင်ငါ့ကိုစိတ်ခံစားမှုအကင်းမဲ့၏အမည်ပြောင် earnt တစ် snide မှတ်ချက်သို့မဟုတ်စော်ကားမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ရှိမရှိငါ့ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ အမှုအရာသူတို့မရောက်မီလုပ်ခဲ့တယ်မတူဘဲယခုငါ့ကိုဖို့စတင်နေကြသည်အဖြစ်ထူးဆန်းပင် 10 ရက်အကြာမှာကျွန်မပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရသည်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင် strangest ခံစားချက်တွေကိုပေမယ့်ဖြတ် porn သင်၏အသက်ကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်ဟုနိမိတ်လက္ခဏာကိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်အနည်းဆုံး (၃) နှစ်လုံးလုံးမငိုခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်အသက် (၁၈) နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်းယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည် YouTube ၌အမှန်တကယ်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက် (ကောင်လေးကသူ့အမေကိုကင်ဆာရောဂါဖြင့်ဆုံးသွားခြင်း) နှင့်ကလေးငယ်လိုငိုချလိုက်ခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ငါပြောချင်တာက ၁၀၀ ရက်အကြာမှာငါဟာငါ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပြန်ရစေတယ်။ ငိုခြင်းနှင့်ခံစားခြင်း၏ပုံမှန်, porn နှင့် MO သည်သင့်အားထုံထိုင်းစေသည်။ ဝမ်းနည်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းသည်ယခု ပို၍ ပြင်းထန်သောခံစားချက်များဖြစ်သည်။ ငါ Nofap ငါ့ထံသို့ဆောင်ခဲ့သောအရာအားဖြင့်လုံးဝရှုပ်ထွေးတယ်။
ငါနောက်တဖန် Crushes ရှိသည်ဖို့စတင်နေပြီ
ငါ porn ကို အသုံးပြု. နှင့်နေ့တိုင်း fapping ခံခဲ့ရသည့်အခါ, ငါလှည့်ပတ်မိန်းမများအဘို့အနီးပါးဘာမျှမခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အခုတော့ပြီးနောက်နီးပါးအနိုင်နိုင်ဆို porn (4 သို့မဟုတ်5ကြိမ် watched) နှင့်အကြောင်းကို 27 ရက်ပေါင်းတစ်ဦးကလက်ရှိ Streak ၏တစ်နှစ် porn သို့မဟုတ် fapping ခြင်းမရှိဘဲ, တဖန်ငါတစ်ဆယ်ကျော်သက်များကဲ့သို့ခံစားကြရသည်။
ငါနှင့်အတူငါကောလိပ်ကျောင်းသွားမယ့်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်အပေါ်အကြီးအကျယ်နှိပ်စက်နေတယ် သူတို့ဟာသူတို့ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ သူတို့ဟာကျွန်မနှစ်သက်ပါတယ်၊ သူတို့နဲ့လိင်မဆက်ဆံဘဲနေချင်ပါတယ်။ တ ဦး တည်းကိုမကြာမီမေးပါလိမ့်မယ်။
ငါအနှစ် ၂၀ နီးပါးခန့်ရှိနေပြီ၊
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကကစားစရာပုံပြင် ၃ ကိုတောထဲသို့ ၀ င်ကြည့်ရင်းသက်ပြင်းချသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခံစားချက်ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်နှစ်သက်ပြီးမုန်း၏။ ဟင့်အင်း၊ ငါထင်တာကမင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိင်စိတ်ကူးတွေမကျူးလွန်မိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။
152 ရက်ပေါင်း Hard-mode ကို။
ဒီဝေးသွားဖို့ငါ့အကြံအစည်အတွေ့အကြုံနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဦး နှောက်ပလတ်စတစ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်မူလအခြေအနေသို့ပြန်သွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုမေးခြင်းမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း / orgasm / sex / porn ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြားသောဓာတုပစ္စည်းများသည်လည်းအခြေခံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ ငါဒီဓာတုပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေထဲကတစ်ခုကတော့ dopamine (သို့) serotonin တွေသာမက oxytocin လည်းပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ပုံရတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ LOVE ရဲ့စိတ်ကူးကပိုများနေပုံရသည်။ အစဉ်အလာထက်လက်ရှိ .. သို့မဟုတ်ငါအများကြီးအသက်ငယ်စဉ်ကတည်းက။
porn ဒေါသအထဲကရှောင်ဖယ်ထားသည် Gone?
ဒါကြောင့်ငါ့ဘ ၀ မှာရှိတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘယ်တော့မှမကိုင်တွယ်ချင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ပြsupနာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်သလိုပဲ၊ ငါဟာကလေးဘဝတုန်းကငါ့ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုဂရုမစိုက်တဲ့အတွက်မိဘတွေကိုအရမ်းဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ အိုးနှင့် 52 ရက် !!! ငါ 60 ရက်မတိုင်မီတစ်ချိန်ကသွား၏။ ငါမျှော်လင့်ပါတယ်ငါ့အစံချိန်ကိုချိုးဖျက်ဖို့သတ်မှတ်ထားတယ်! နှစ်ပေါင်းများစွာလျှို့ဝှက်စွာဝှက်ထားသောစိတ်ခံစားမှုများကိုအခြားမည်သူမဆိုသူတို့ porn ကိုစွန့်ခွာသောအခါထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ PS ငါနေ့လည်စာစားပြီးတာနဲ့ငါဆာလောင်နေတုန်းပဲ။
ငါဂီတကိုထပ်ခံစားလို့ရတယ် သူစိမ်းတွေနဲ့စကားပြောရတာပျော်တယ် ကျွန်တော် ၁.၅ နှစ်ရှိပါပြီ
ငါ့ဖုန်းမှာဒါသိပ်မရှည်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီ shit နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့သူတွေကိုမျှော်လင့်ချက်အနည်းငယ်ပေးချင်တယ်။
၎င်းသည်အလွန်ဆိုးဝါးသောရောဂါများဖြစ်သည်၊ လုံးဝသံသယမရှိပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများ၏“ အပေါ်နှင့်အောက်” သဘောသဘာဝ၊ ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှေးကွေးသောသဘာဝနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုယ်တိုင်။ တစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ရွှင်လန်းမှုများစွာကိုရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ပါ။ အခုငါဂီတကိုငါအရင်ကလိုခံစားလာနေပြီ၊ သူစိမ်းနဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြားမှာရုန်းကန်နေရမယ့်အစားသူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့စကားစမြည်ပြောနိုင်ပါပြီ။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့စုံတွဲနှစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော့်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတာအမှန်ပါပဲ၊ ငါတကယ်တိုးတက်နေပါတယ် သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး နောက်ပြီး rewiring ဆိုတာအရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းလို့ပြောသူတွေကိုပဲ့တင်သံ - ပုံမှန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (ပုံမှန်အားဖြင့်အောင်မြင်သော) လိင်ဖြစ်သည့်ပုံမှန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာနဲ့အမျှကျွန်မရဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းသွားတာပိုရှင်းပါတယ်။
NoFap ငါ့ကိုနောက်တဖန်ဂီတခံစားရဖန်ဆင်းပြီးပို (ရှည်လျားသောပို့စ်)
ဒီမှာငါ့ဇာတ်လမ်းပါ။ Reddit ထဲကို ၀ င်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ NoFap ဖိုရမ်တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သည်။ ငါဒီမှာခဏခဏလာနေတယ်၊ ​​ငါဟာစာရင်းရှိသင့်တယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ East Coast မှဖြစ်ပြီး ၂၁ နှစ်ဖြစ်သည်။ hardmode တစ်ခုနှင့်တစ်နှစ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြင့်သွားသည်။ NoFap ကိုပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်မှာငါစတင်ခဲ့တယ်။ ငါမတိုင်မီနှစ်ပေါင်း fapping ခဲ့သညျ။
ထိုအ btw, ဒီရှည် post ကိုသို့လှည့်, ဒါပေမယ့်လူတွေတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုတစ်စုကထွက်ပါစေရန်၎င်း၏ကောင်းတဲ့။
ဒီနေ့ဟာငါ့ရဲ့ ၅၀ ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲလည်းကုန်ဆုံးသွားပြီ။ ငါသည်သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေနှင့်အတူမကြာသေးမီကငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်သောအလွန်အထူးတစ်ခုခုမျှဝေချင်တယ်။ ကျွန်တော့်မိသားစုကအရမ်းတီးမှုတ်တယ်။ ငါလည်းငါပဲ။ ငါစတာဘယ်တော့မှမသိဘူး၊ ငါကကြားနိုင်ပြီးပျော်မွေ့နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါဂီတကိုမခံစားနိုင်တော့ဘူး (ဒီဟာကဂျက်ဇ်ဂီတ၊ ဂန္ထဝင်နှင့်ညွှန်းဆိုသောတေးသံ) ။
ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်တစ်ခုခုရိုက်ယူခဲ့သည်ကြောင့်အပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ တကယ်တော့ဂီတခံစားရနိုင်! ငါပြောင်းလဲသွားတယ်ခဲ့ရာသို့ကြည့်ရှုလျက်, က PMO ခဲ့သညျ။ ငါပထမဦးဆုံး fapping စတင်သောအခါငါဂီတခံစားရတယ်ငါ့နိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်ဒါကြောင့်မည်သည့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းသဘောပေါက်တစ်ချိန်ကပြီးတော့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာကျနော်စန္ဒရားဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျောင်းသံစုံတီးဝိုင်းများတွင်ကစားခဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ငါ့ကိုသဘောပေါက်။ ငါနေဆဲသီခငျြးဆိုပေမယ့်ယခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောခံစားရပါတယ်။ ငါတကယ်နောက်တဖန်စန္ဒရားသင်ခန်းစာတွေကိုယူချင်တယ်။ ငါကအားလုံးကိုပြန်ရချင်တယ်။
ထိုတိုးတက်မှုရှိရပ်တန့်မထားဘူး။ ငါတကယ်အခုလည်းအခြားအမှုအရာပြီးမြောက်ချင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေ့လာခြင်းကိုအသည်းအသန်ပစ်လိုက်တယ်၊ ငါပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေအတွက်လုပ်နေတယ်။ ငါအမြဲတမ်းတောက်လောင်နေတဲ့အတွက်ငါတစ်ခါမှမစဉ်းစားဖူးတဲ့အရာတွေ။ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ လုံခြုံရေးနှင့်အေးမြသောအရာများကိုတည်ဆောက်ခြင်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူနိုင်သည့်အရာများကိုလုပ်ချင်သည် (ကျွန်ုပ်သည်အင်ဂျင်နီယာ / သုတေသီတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်လေ့လာနေသည်) ။
ရက်ပေါင်း ၅၀ ပဲကြာတော့ဒါငါပြန်ရဖို့အများကြီးကျန်သေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုပြန်ယူလိုက်တာကငါ့အတွက်အများကြီးပဲ။ တိုက်တွန်းချက်တွေကကျွန်တော့်ကိုဘယ်လောက်အထိပြောင်းလဲနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောတိုင်းငါလိမ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ အဲဒါကclichéလို့ထင်ကောင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ ငါနောက်တဖန် fapped လျှင်, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုမိကြောင်းဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ ယခုမှာနောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲများအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆောင်းရာသီတွင်ပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်းမရှိတော့သည့်အတွက်တိုက်ပွဲသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်။
ဒါကလူအချို့အတွက်စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ငါဒီနေရာကယူပြီးဖြစ်ပါသည် ... ခိုင်မာတဲ့လူတိုင်းကိုစောင့်ရှောက်! သင်ဤအရာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါကသင်အမှန်တကယ်လူတစ် ဦး ဖြစ်လာနိုင်သည်။
ဒီနေ့မှာတော့ White Collar ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ပြီးတစ်ချက်မှာငိုခဲ့တယ်။ တီဗွီအစီအစဉ်ကကျွန်တော့်ကိုတစ်ခါမှမငိုခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ... လူ့ခံစားရတယ်။ ငါနောက်ဆုံးဟစျကျွောခဲ့သညျကိုမမေ့နိုင်ပါ၊ PMO ကျွန်တော်တို့ကိုတိရိစ္ဆာန်များသို့လှည့်။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်စာရိုက်နေစဉ်ငိုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်ခံစားနိုင်ဆဲဖြစ်ပြီး PMOing ကိုပင်စိတ်ကူး။ မရပါ။ နောက်တစ်ခါတစ်ခုခုကသင့်ကိုငိုစေသည့်အခါသင်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုလေ့လာပြီး PMO ကသင့်ကိုမည်သို့ဖယ်ရှားသည်ကိုသတိပြုပါ။
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ nofap စံချိန်ကို ၃ ပတ်ကြာအောင်ထိန်းသိမ်းထားသည် (ယခုကျွန်ုပ်အသက် ၂၀) ။ နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ယခင်ကထက်စိတ်ပျက်အားလျော့သွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ဟပ်ရန်အချိန်များစွာရခဲ့သည်။ နာပါတယ် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်၏လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကပိုမိုကောင်းမွန်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ဟုခံစားရသည်။ သို့သော်အစားကျွန်ုပ်အားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်စားပြီးဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းများကိုဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့သည်။ ငါဂိမ်းတွေမှားနေတယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ fapping ကကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေး (သို့) တိုးတက်မှုအတွက်နေရာမချန်ဘဲကျွန်တော့်ရဲ့အချိန်တွေအကုန်လုံးကစားဖို့အချိန်ဖြုန်းနေတယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။
ငါအများကြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ခြင်းကငါ့ကိုစငိုစေခဲ့တယ်။ ဒီအတွေးကကျွန်တော့်စိတ်ကိုတောင်ဘယ်တော့မှပြန်မထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူး၊ အဲဒါဟာကျန်းမာတယ်လို့ကလေးတွေအားလုံးထင်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ စိတ်မကောင်းစရာအတွေးတစ်ခုရုတ်တရက်ရောက်လာရင်တောင်ငါမျက်ရည်ကျမိမှာပဲ။ ဒီအတွေးကိုကျွန်တော်ဖိနှိပ်ပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ ငိုရတာပျော်တယ်။ ငါအသက်ရှင်ပြီးနောက်ခံစားခဲ့ရနှင့်လန်းဆန်း။
ငါ nofap ကိုစတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာထက်ကိုယ်ထိလက်ရောက်သက်သာမှုရရုံသာမကစိတ်ဖိစီးမှုပိုကောင်းတဲ့ခံစားမှုကိုလည်းငါခံစားနေရတယ်။ ငါ့အတွေ့အကြုံအရ fapping သည်ခန္ဓာကိုယ်မှစွမ်းအင်ကိုထုတ်ယူရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွန်စိတ်မထိန်းနိုင်သောစိတ်ကညစ်ညမ်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်မှန်နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်ထဲသို့ ၀ င်စေခြင်း၊ ခင်မင်ခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်ခြင်းသည်ဝယ်ယူထိန်းသိမ်းရန် ပို၍ ခက်ခဲစေသည်။
ရက် ၅၀ ရက် hardmode ... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာငါ့ဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်ငါသိ၏။ ငိုလို့ရတယ်
ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ .. ငါအရမ်းဖိစီးနေတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာပထမဆုံးယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးမှုခံစားရတယ်။ အရမ်းအစွမ်းထက်ပြီးလှတယ်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် ၅၂ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ရက် ၁၈၀ လုပ်လိုပါသည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်နှလုံးသားကပိုပိုပြီးပွင့်လင်းလာတယ်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရဘူးစိတ်ခံစားမှုနာကျင်မှုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။ nofap-community ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လူသည်ကိုယ့်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခု rollercoaster မှတဆင့်သွားနေပါတယ်။ ကိုယ့်နောက်ဆုံးသောကာလအျောဟစျသောအခါကိုယ့်ကိုမှတ်မိအတွက်မရှိမဖြစ်: ဈတယ်စီးပွားပျက်ကပ် (ရက်အကြာ2စတင်ခဲ့ပြီး) သိပ်ခဲ့ကြပြီးတော့သူကငါ့ကိုဝင်တိုက်သောကွောငျ့ယနေ့ဈမိန်းကလေးတစ်ဦး၏ရှေ့မှောက်၌ဟစျကျွောလေ၏! ဈယခုဈထပ်နာကျင်မှုများနှင့်ဘဝခံစားရတယ်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုထုံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယင်း၏ခက်ခဲ fuckin, ဒါပေမယ့်ကိုယ်က၎င်း၏ညာဘက်ကိုသိ၎င်း၏လိုက်တယ်! စာဖတ်ခြင်းအတှကျကြေးဇူးတငျ!
ငါ့အပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲမသိဘူး ပြင်းထန်သောစိတ်ဓာတ်ကျမှုမှမျက်ရည်များစီးကျလာသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဤမျှလောက်မငိုခဲ့ပါ၊ လူသားတစ် ဦး နှင့်တူသည်။ ဒါပုံမှန်လား ??
သငျသညျ nofap သွားပြီးနောက်အခြားတစုံတယောက်သောသူသည်အစစ်အမှန်အလွယ်တကူငိုကြွေးအော်ဟစ်ပါသလား?
ဟုတ်တယ် ငါနည်းနည်းငိုခဲ့တယ် ဒါကမိန်းကလေးနှင့်အတူတက်ခြိုးဖောကျဖို့အလားတူခံစားမှု။
ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်စနစ်ထဲမှာ dopamine နည်းတာကြောင့် ... ခဏကြာတော့စိတ်ခံစားမှုလျော့နည်းလာပြီးပျော်ရွှင်လာတယ်
တီဗွီရှိုးတစ်ခုတွင်“ မုဒိမ်းမှု” မြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အစာအိမ်နာနေသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ NoFap ထိခိုက်လွယ်မှု။
Nofap ကကျွန်တော့်စိတ်ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ ငါ porn ကိုတစ်နေ့သုံးကြိမ် (သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) ကြည့်ရှုလေ့ရှိတယ်အခါ။ ငါတော်တော်လေးကြမ်းတမ်းအကြောင်းအရာကြည့်ရှုအစာအိမ်နိုင်ဘူး။ အတင်းအကျပ်လိင်ကိစ္စများကကျွန်ုပ်ကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်မျိုးစုံ streak ပြီးနောက်ယခု 20 ရက်အပေါ်။ TV show မှာအဓမ္မပြုကျင့်ခံထားရတဲ့မြင်ကွင်းကိုငါမြင်ခဲ့ရတယ်၊ ပြီးတော့ငါ porn မှာတွေ့ရတဲ့အရာတွေဟာပုံမကျတော့ဘူး။ တကယ်တော့ဒါဟာငါ porn အတွက်မြင်ကြသောအရာကိုပင်နီးကပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါပေမယ့်တချို့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဒါဟာငါ့ကိုရွံရှာဘွယ်သောအဖြစ်ငါ့ကိုလုပ်ကြံလေ၏။ ငါငါးနှစ်အရွယ်ကဲ့သို့ငါ၏ရည်းစားသို့လှည့်။
ငါတီဗီကိုကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး၊ လူတွေကဒါကိုဘယ်လိုကြည့်နိုင်မလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ ဖျားနာနေသဖြင့်ရေချိုးခန်းသို့သွားကာ၊ ငါ lol puked ကျွန်တော့်ရည်းစားကအရမ်းကိုရွံရှာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရမ်းစက်ဆုပ်ရွံရှာတဲ့အတွက်အဲဒါကိုတွန်းထုတ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာတွေ့လိုက်ရတယ်။ “ တစ်ယောက်ယောက်ကအမှန်တကယ်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့်အခြားလိင်ဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုများအပေါ်အလွန်အမင်းပြင်းထန်စွာခံစားရနိုင်ခြင်း၊ ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုနိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အရာအချို့ကိုယုံကြည်ပြီးယခုကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်သောကြောင့် ၀ မ်းသာမိသည်။
အသိုင်းအဝိုင်း Nofap ကျေးဇူးတင်ပါသည်🙂
တဖန်ငါအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ရယ်မောနိုင်ပါတယ်
အခုတော့သတိရပါ၊ အစဉ်မပြတ်ငါကဲ့သို့သောသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ LOT, LOT LOT ရယ်သောကောင်လေးတစ်ယောက်အမြဲရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အခါဘယ်တော့မှရယ်မောမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါရယ်စရာကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုလိုငါရယ်ချင်ဆုံးသောမှတ်ချက်ကိုဖတ်တဲ့အခါဒီနေရာဟာ upvote တစ်ခုပဲ။ အများအားဖြင့်တော့မရယ်ပါ။
ဒါပေမယ့်မနေ့ကအကြီးအရာတစ်ခုခုကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါရူးသွပ်အမျိုးသားများ၏ရာသီ3ဇာတျသိမျးမြင်လျှင်, တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရယ်စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုရှိခဲ့ပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီကတက် လာ. သကဲ့သို့ငါဖြောင့်2မိနစ်ရယ်တယ်။ အဘယ်သူမျှမရပ်ပါ။ ကျွန်မမိဘတွေတောင်မှငါ့ကိုမအပေါ်ကိုတက်စစ်တယ်။
ထို့နောက်တစ်နာရီပြီးနောက်, ငါစာသားဖြစ်ပျက်သောငါ၏အသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည့် Reddit အပေါ်မှတ်ချက်ဖတ်ရှုပြီးနောက်ငါ၏အကီးဘုတ်ကျော်ကော်ဖီထွက်တံတွေးထွေး။
ငါတစ်ယောက်တည်းရယ်ပြီးဘယ်တော့မှမပျော်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုငါလုပ်နိုင်မယ်လို့ငါထင်တယ် ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့။
[114 ရက် update] စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုစို့။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးငါသူတို့ကိုခံစားရတယ်။
ကောင်းပြီကြောင်းရည်းစားနဲ့ကျွန်မပြိုကွဲ။ သေချာသည်မှာရှုပ်ထွေးမှုမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးယခင်ကရှိခဲ့သောချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံး (လွန်ခဲ့သော ၁၁၄ ရက်ကကျွန်ုပ်မရောက်ခဲ့ပါ) ရင့်ကျက်သူများဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကနာကျင်စေသည်၊ အလွန်နာကျင်စေသည်။ ၃ လ ၄ လလောက်မှာကျွန်မထုံနေပြီးနာကျင်မှုကိုသင်္ဂြိုဟ်ပြီးပြappingနာကိုဆက်ပြီးဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်နေ့မှာကျွန်တော်ငိုတော့မယ်။ တကယ်တော့ငိုတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ သို့သော်လူသည်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များကိုငိုခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအားဖြင့် ၀ မ်းမြောက်စွာခံစားခွင့်ပြုသည်။
ယခုတွင်ငါသည်လူတစ် ဦး တည်းအဖြစ်သာမကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သာကတိကဝတ်ပြုသည်။ အခြေအနေကရှုပ်ထွေးနေပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစဉ်းစားမိစေခဲ့ဘူး။
porn အနုတ်လက္ခဏာနှင့်အပြုသဘောအပါအဝင်, ငါ့စိတ်ခံစားမှုထုံပေ။
ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ဤအချက်၏အဆုံးကိုချဉ်းကပ်သောအခါ PMOing သည်ကျွန်ုပ်၏မူလနှုန်းထားအတိုင်းတစ်ပတ် PMOing သုံးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်အားမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်မှ ၅ ကြိမ်အထိ။
ရိုးရိုးလေးပြောရရင်သူကကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထုံထိုင်းစေတယ်။ သို့သော် anhedonia (ပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ သင်ဆုတ်ခွာခြင်း / flatline တွင်သင်ရနိုင်သည်) TOTAL anhedonia မဟုတ်ပါ (ကျွန်ုပ်၏အစစ်အမှန်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရရန်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းရည်သည်ကျွန်ုပ်လက်ရှိအခြေအနေတွင်ရှိသင့်သောပမာဏ၏ ၁၀% ဖြစ်နိုင်ပါသည်) PMOing သည်အနုတ်လက္ခဏာခံစားမှုများကိုလည်းထုံထိုင်းစေသည်။ ငါ PMOing ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကစကတည်းက, ငါ့အကြောက်လွန်ရောဂါနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဆင့်အတော်လေးနိမ့်ပါပြီ။
ဒါပေမယ့်ငါခံစားမိတာကိုမုန်းတယ် (အော်ဂဇင်လွန်ဆိုးရွားတဲ့ရက်နာမှုကမကောင်းဘူး၊ ဒီမှာအများဆုံးတွေ့ရတာသေချာတယ်၊ အဲဒါကငါ့အတွက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသလိုမဆိုးဘူး) ။ ပြီးတော့အဆုံးသတ်စေချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုသည်ပုံမှန်အတိုင်းနည်းသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သာမန် PMO စွဲလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ (ရုပ်သိမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ PMO တွင်ဖြစ်ပျက်သည်။ သို့မှသာမည်သူမျှအချိန်ဖြုန်းခြင်းမရှိသည့်ပြန်ကြားချက်ကို တင်၍ ကျွန်ုပ်၏သဘောထားအတွက်ဝမ်းနည်းသော်လည်း၎င်းသည်မျှော်လင့်ရပါသည်။ ငါ) နှောင့်အယှက်ကိုရှာဖွေကြဘူး။
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မအကြားဆက်ဆံရေးအကြီးအကျယ်တိုးတက်ခဲ့သည်။ နှင့်အညီ, ငါသိသိသာသာတစ်ခုခုသတိပြုမိပါပွီ: ငါလုပ်နိုင် ခံစား ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ငါရန်အသုံးပြုသည်ထက်။ အစဉ်အမြဲငါရှိတယ်ထက်ငါသည်ငါ့ဇနီး, ကလေးတွေ, နှင့်မိသားစုများအတွက်ပိုပြီးမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်ခံစားရတယ်။ ငါသည်ဤငါအောင်မြင်ပါပြီလွတ်လပ်ခွင့်၏အဓိပ္ပာယ်မှလာထင်နှင့်, သူတို့သည် သိ. ညစ်ညမ်းနောက်တဖန်ငါ့ကိုထိန်းချုပ်ရှိသည်ပါဘူးနှင့်နောက်တဖန်လိမ့်မည်ဘူး။ ငါ (ငါ Agnostic ဗီရို၏မျိုးဖြစ်ခဲ့သည်) ကိုလည်း ပို. ဝိညာဉ်ရေးရာအရင်ကထက်ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ငါတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားပါဝါ၌ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ဖို့အတှကျအကောငျးထင်နှင့်အမှန်ပင်ဘုရားကျောင်း / ကိုးကှယျမှု၌ငါ၏ပဌနာနှင့်အချိန်ငါသတိရထက်ပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသောပါပြီ သူတို့ကိုအများကြီးနှစ်များတွင်ဖြစ်ခြင်း။ ငါသည်လည်းပိုပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်, ဒီထက်အမျက်ထွက်ခြင်း, ဝေးလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့အသက်တာ၌သေးငယ်တဲ့အမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ကြောင်းကို
NoFap ကသင့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေလျှင် ...
ငါတို့ရှိသမျှသည် fapping စွဲဖြစ်လာသည်။ စွဲလမ်းမှုသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှ dopamine မည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင် Fapping ဖြတ်သောအခါ။ မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က“ ဘာဖြစ်နေတာလဲ၊ ငါတို့ dopamine အလျင်အမြန်ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ” လို့ပြောတယ်။ ၎င်းသည်သူ့အား“ ပုံမှန်” လမ်းသို့ပြန်လှည့်ရန်သူ့အားဖိအားမပေးမချင်း fapping ကိုအဖြစ်မှန်မှလွတ်မြောက်စေခဲ့သည်။ အဲဒါကိုမငြင်းပါနဲ့၊ ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ fuck ဆိုတဲ့အထီးကျန်ဆန်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ငါတို့ fap ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာငါတို့အတွင်း၌ရှိသောအထွတ်အထိပ်၊ အထီးကျန်မှု၊ အဆက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ထိုအရာအားလုံးကိုဖြည့်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင် fapping ကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အခါ၊ သင်ဟာပိုပြီးထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် မင်းလိုမင်းနဲ့ဒီ pornstar တွေဟာအချစ်ထဲမှာရှိကြတယ်၊ သို့သော်သင်သည်ထိုအချိန်ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်တည်ဆောက်သည့်အခါသင်သည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်တူသည်ဟုခံစားရပြီးဇီဝဗေဒအရသင်လည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ခိုင်မာတဲ့ Bros နေပါ။
ထို့နောက်လှုံ့ဆျောမှု၊ မောင်းနှင်မှု၊ စွမ်းအင် - ကျွန်ုပ်တို့ဂူမှထွက်ခွာရန်၊ ပေါင်းသင်းရန်၊ လူတို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်သိကျွမ်းရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်ထိုနေရာများမှလာသည်။
ငါကနောက်ဆုံး 10 နှစ်ပေါင်းဟစျကျွောလေ၏င့်ထက်ကဒီ NoFap Streak အပေါ်ပိုပြီးဟစျကျွောလေ၏
ကိုယ့်မနေ့ကငိုဖြိုဖျက်ကြ၏။ ကိုယ့်အခြားအရာအားလုံးကဲ့သို့ပြင်းထန်သောစိတ်ကျဝေဒနာကြောင့်တက်မြေဖြူတွေသုံးပြီးလေ့ရှိတယ်။ သူတို့တည်ရှိနေပါလျှင်ဤအချက်မှာယခုငါသည်ငါ့ဓာတုညီမျှမှုပြောပါလိမ့်မယ်, ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ဖန်တီးမှုထက်ပိုပါတယ်။ ငါကဝန်ကိုထုတ်သွားကြဖို့လေ့တစ်ခုခုကိုကြိုက်လာသောအခါအစဉ်မပြတ်ငါဒါတစ်ခုစွဲလမ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးခဲ့ပါတယ်။ porn အများကြီးဖြစ်ပေါ်သောဓာတုတုံ့ပြန်မှုများနှင့် desensitizing နှင့်အတူသင့်ဦးနှောက်အပေါ်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့လုပ်ဆောင်လိုအသံ။ ငါအတိတ်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကိစ္စများနှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ကြပါပြီအဘယ်ကြောင့်ဒီအကိုလည်းငါ့အဘို့ရှုထောင့်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်။ ငါတကယ်တချို့လူတွေကဒီ Pseudoscience ထည့်သွင်းစဉ်းစားပုံကိုနားမလည်ကြဘူး။ သူတို့ကကျနော်ကြုံတွေ့ဖူးတဲ့အတူတူကိစ္စများရှိသည်မဟုတ်ရပါမည်။
ငါရက်ပေါင်း ၂၀ တုန်းကနောက်ဆုံးအကြိမ်ပဲ .. ငါအကြောင်းပြချက်မရှိငရဲလိုအော်ငိုခဲ့တယ်။
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သမျှသောအမှန်တကယ် NoFap ရေးသားချက်များဖြစ်သည်! ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်ဒီ post ကို 101% သဘောတူသည်။ nofap ကိုစလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ကျွန်တော်ဟာငိုနေတဲ့အချိန်အထိအရာဝတ္ထုတွေကိုပေါက်ကွဲစေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်လိုအပ်တဲ့အခါပိုပြီးဝမ်းနည်းလာတယ်။ ခဲမတိုင်မီဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ nofap မတိုင်မှီ၌ကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအရာအားလုံးကိုစိတ်မ ၀ င်စားကြောင်း၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်ကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်သောကျန်းမာရေးနှင့်မကိုက်ညီသောသေဆုံးသည့်စိတ်အခြေအနေ၌တည်ရှိသည်။
သင်ရေးသားခဲ့သည့်အရာ၏ ၉၀% နှင့်သဘောတူပါ။ ငါတစ်ယောက်တည်းနေပေမယ့်အထီးကျန်တော့မှာမဟုတ်ဘူး ငါလာမယ့် 90 လအဘို့အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက်များအာရုံစိုက်တယ်။
ငါ nofap ၏7ရက်အကြာမှာတွေအများကြီးဟစျကျွောလေ၏။
မင်းရဲ့ပို့စ်ကငါမှတစ်ဆင့်ပဲ့တင်ထပ်နေတယ်။ ငါဘာကြောင့် ၀ မ်းနည်းစရာ၊
မှန်ကန်သော !! အဲဒီအခြိနျလာသောအခါငါဝမ်းနည်းမှု, နည်းနည်းစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ခံစားမှုအကင်းမဲ့, စသည်တို့နှင့်အတူရင်ဆိုင်နေရတာပါအခုတော့ကိုယ့် porn ထင်ဒါပေမယ့်ကိုယ့် fapping ရပ်တန့်ဖို့အကြောင်းပြချက်ရှိသည်နှင့် nofap ဒါနဲ့တောင်မှပဲ (ထိုလမ်းမှငါ့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြအခြို့သောဗီဒီယိုများအားစောင့်ကြည့်ကွာ porn ထံမှသိမ်းဆည်းထားကြပါ ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ relapse) အရာခပ်သိမ်းငါ့အားပွင်ပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်လူတိုင်းမကြာမီ nofap လုပ်နေတာ
ကောင်းပြီကျေးဇူးတင်စကားဆိုပါတယ်! NoFap ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး FAP သူတို့နှင့်အတူ numbing အားဖြင့်သူ့ကိုမှန်ကန်ခံစားချက်တွေကိုဖယ်တွန်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
PMO ကြောင့်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုသည်တစ်ချိန်လုံးမြင့်တက်နေပြီးအသစ်တစ်ခုသင်ကြားတိုင်းအချိန်တိုင်းဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြblockနာရှိနေသည်ဟုခံစားမိပြီးကျွန်ုပ်ကိုအမှန်တကယ်သင်ယူခြင်းမှတားဆီးခဲ့သည်။ Uni တွင်ရှိနေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်နိုင်ပြီဟုထင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ရရှိသမျှတွင်အထူးချွန်ဆုံးဖြစ်သည်။ ယခုမှာငါသည်နွေရာသီကျော် resits လုပ်နေတာ။
nofap အကြောင်းလေ့လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါ့ ဦး နှောက်ဟာရေမြှုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်လာတယ်။ ငါအတန်းထဲမှာထိပ်ဆုံးနေရာ ၁၅ နှစ်ရောက်နေပြီလို့ခံစားရတယ်။
ငါသဘောပေါက်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ ၁၈ နှစ်မပြည့်ခင် (အခုအသက် ၂၂ နှစ်) မတိုင်မီတစ်ကြိမ်မှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ငိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရယ်မောလေ့ရှိတယ်၊ ငါဟာငါ့အတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိရမိတယ်၊ ဒါပေမဲ့တစ်နေ့တော့ကျွန်တော်ကရပ်လိုက်တယ်။ ငါကြည့်ရတာရယ်စရာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေများလွန်းတာကိုကြည့်ပြီးဟာသနဲ့နေလေ့ရှိတယ်။ မကြာသေးမီကမှသာ PMO ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုငါသိခဲ့တယ်။
ငါမနေ့ကစာမေးပွဲကထွက်လာပြီး reddit ကိုနည်းနည်းလောက်အေးအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ minion hate လို့ခေါ်တဲ့ခွဲတစ်ခုပေါ်ကဓာတ်ပုံကိုငါတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါတကယ်အရမ်းရယ်မောခြင်းမှအော်ဟစ်! ဒါကအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့သည်! ငါအသက်အရွယ်မရွေးခံစားခဲ့ရအလျင်အမြန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ပါတယ်!
တကယ်တော့နောက်တဖန်ငါ၏အဟောင်းများကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့တူခံစားရ !! ငါမသွားငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့ဤအခွဲအပေါ်သင်တို့ရှိသမျှကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်! ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲသွားပါ၏!
ပြန်စဉ်းစားစရာအနည်းငယ်၊ ငါ ၁၁ နာရီမှစ၍ PMO တစ်ရက်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်၊ ယခုကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းဂရုမစိုက်တတ်သူ၊ လူများစွာနှင့်အနီးကပ်ဆက်သွယ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအနည်းငယ်ရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လူသစ်များနှင့်စကားမပြောရန်တားဆီးခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်မနေ့ကငါကောင်မလေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့နေ့လည်စာစားဖို့သွားခဲ့တယ်။ သူမနဲ့ ၂ နှစ်လောက်သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရပြီးဘယ်သူ့ကိုမှတောင်မှသူနဲ့ကျွန်မမခံစားဖူးဘူး။ nofap မတိုင်မီကျွန်ုပ်၏အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းများနှင့်ပင်လူများနှင့်မည်သည့်ခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုမှမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်သူမနှင့်အတူရှိနေစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်ခဲ့သည် (nofap နောက်ပိုင်းတွင် ပို၍ ခံစားခဲ့ရသော) စိတ်ရင်းမှန်သောရယ်မောခြင်းနှင့်မျက်စိအဆက်အသွယ်များကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ငါသူမနှင့်အတူရှိစဉ်ကအမှန်တကယ်လိပ်ပြာများရရှိခဲ့ဖူးသည်၊
ဒီဟာကငါလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကပျောက်ဆုံးနေတာလား ငါစိတ်ခံစားမှုကင်းမဲ့စက်ရုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီစွဲလမ်းမှုကနေငါ့ကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဟာတစ်ပတ်လောက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာသိပေမယ့်ဘဝနဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေတွေအကြောင်းငါအရင်ကထက်ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်နေပြီ။
ဒါနဲ့အခုအရက် ၇၀ လောက်လမ်းလျှောက်နေရတယ်၊ ငါနှစ်တွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ငိုခဲ့တယ် မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်အတူဖလော်ရီဒါသို့သွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအဲဒီမှာရှိတုန်းက tupac ရဲ့ချစ်လှစွာသော mama လို့ခေါ်တဲ့သီချင်းကိုအမြဲနားထောင်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့သော ၂ လက မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါကထပ်ပြီးနားထောင်ပြီးငိုတော့တယ်။ မကြာသေးခင်ကငါ့အဖေမှာကင်ဆာရောဂါရှိခဲ့ပြီးအမေလည်းအလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲသူသေဆုံးသွားနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့်ငါအဲဒီအခြိနျကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကိုဘယ်တော့မှမပြဘူး။ ယခုမူကားငါတူသောခံစားမိ Trapped စိတ်ခံစားမှုအခမဲ့ချိုးဖောက်ကြောင်း။ ဒီသီချင်းကိုနားထောင်နေရင်းငါ့မိသားစု၊ ငါ့အဖေ၊ အမေနဲ့အစ်ကိုအကြောင်းတွေးပြီးငါဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာကိုပဲတွေးခဲ့တယ်။ ဤအရာကိုတင်ချင်ရုံမျှမကဤအရာအားလုံးကိုဖတ်နေသူတိုင်းသည်သူတို့မိသားစုထံသို့သွားပြီးသင်ချစ်ကြောင်းသူတို့အားပြောသင့်သည် ငြိမ်းချမ်းရေး
ကျွန်မစိတ်ခံစားမှုအကင်းမဲ့ဖြစ်ခြင်း၏4နှစ်ပေါင်းနောက်၌ဟစ်
NoFap ကိုကြိုးစားတုန်းကကျွန်တော်ဟာပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကငါမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေကိုကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါ့ကိုတကယ်ထိမိခဲ့တဲ့တစ်ခုကတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့တကယ့်ခံစားချက်ပါ။ ဤနှစ်များတစ်လျှောက်လုံးအမျိုးသမီးများအားတပ်မက်စွာတပ်မက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များကိုအမှန်တကယ်ချေဖျက်နိုင်ခဲ့သည် ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ငါငိုခဲ့တယ် ငါဝမ်းနည်းလို့မဟုတ်၊ ကျွန်တော့်မှာကြီးမားတဲ့ Streak မရှိပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကငါနဲ့ငါကြားကခြားနားချက်ကိုကျမလုံးဝခံစားမိသည်။ လူတိုင်းကံကောင်းပါစေ
သငျသညျ Nofap ပေါ်မှာပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမျက်နှာ၌လာကြတယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ အဲဒီမှာကောင်းမကောင်းစိတ်ခံစားမှုဖြစ်ကြပြီးနောက်တဖန်သင်တို့ကသူတို့ကို facing စတင်ရန်ရှိသည်။ ဒါဟာငါ့ကိုရန်ဤတနင်္ဂနွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်း၏ကောင်းသော။ ငါငါ့အဘို့ Nofap ၏ရည်မှန်းချက်လွယ်ကူသော s9 ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏မဟုတ်မိန်းကလေးငယ်များသင်နှင့်အတူအိပ်စေ notuced ။ ငါအမှန်တကယ်ရည်းစားကိုရှာချင်တယ်။
ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လကအခြေခံအားဖြင့်ရှည်လျားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်၊ ငါ့ကောင်မလေး (တစ်နေ့လက်ထပ်မယ်လို့ငါအလေးအနက်ထင်ထားသူ) ကငါနဲ့အတူကွဲသွားတယ်၊ အမေကတော့တစ်ရက်မှထွက်သွားခဲ့ပြီ။ ။ ဘဝပျော်ရွှင်မှုမှန်လား ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဟာဆုတ်ဖြဲခံရတယ်။ နေ့တိုင်းပြိုကွဲရုံတင်မကဘူး၊ (ငါနွေရာသီမတိုင်မီကတည်းက PMOd မရှိခဲ့ဘူးနှင့်ဤဖြစ်ရပ်များနွေရာသီပြီးနောက်အနည်းငယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်) ။
ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာအရင်အကျင့်ဟောင်းတွေကိုပြန်လွတ်မြောက်လာသလိုပြန်ကျသွားတယ်။ ငါ PMO ချင်ပါတယ်ပြီးနောက်နောက်တဖန်စုစုပေါင်းစိတ်ပျက်ဖွယ်ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်အန္တရာယ်များစွာနဲ့ကျွန်မအရမ်းငိုတော့တယ်။ ငါ့ဘဝမှာအရေးပါတဲ့လူတွေအကြောင်းမစဉ်းစားတော့ဘဲငါ့ရဲ့အဖေကိုဆိုးညစ်တဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ငိုတာဟာတကယ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ထင်တယ် အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော့်အတွက်တော့ငါတကယ်ဂရုစိုက်တာကိုပြတယ်။ ပြီးတော့အင်းကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးငိုပြီးဘာမှမလုပ်သင့်ဘူးလို့မထင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့မှုကကျွန်မကိုခြောက်လှန့်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်ငါပြီးခဲ့သည့်အပတ်က NoFap တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ငါစိန်ခေါ်မှု5ရက်အထိလုပ်နေတာ။ ငါဟင်းလျာများလုပ်နေတာနေစဉ်, ငါငါ့အမိစဉ်းစားမိတယ်။ ငါကမကူညီနိုင်ပေမယ့်ငိုကြွေးထွက်ခွာသွား, ငါရေပွေးလာသောအခါငါသူတို့ကမှောင်မိုက်လူထုံကဲ့သို့မတ်တပ်ရပ်။ PMO ကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အခါမင်းစိတ်ထဲရှင်းသွားတယ်။ ပြီးတော့ဒီမနက်မှာငါနိုးလာတဲ့အခါငါရဲ့ဆုတောင်းပဌနာနံရံမှာ (ငါဆုတောင်းချင်တဲ့လူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါတဲ့နံရံကိုသိမ်းထားတယ်) ပြီးတော့ငါဟာလူသားတစ် ဦး အဖြစ်ထပ်မံမြင်လာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲမသိရဘူးငါဝမ်းသာလိုက်တာ။ ကျွန်တော်တို့မှာမကောင်းတဲ့နိဂုံးမရှိခဲ့လို့သူမဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်ရုံနဲ့သူမကိုဖုန်းခေါ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စာပို့ဖို့လှုံ့ဆော်ခံရတယ်လို့ခံစားရတယ်။
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာငိုကြွေးအော်ဟစ်စေနိုင်ဘူး။ ဝမ်းနည်းမည်သို့ပင်ရုပ်ရှင်ငါမြင်သို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းဖွယ်တစ်ခုခုကြုံတွေ့, ငါသည်ကိုယ်ကိုဟစ်ကြော်ပါစေနိုင်ဘူး။ ဒါဟာငါ့ကိုယ်မှဒါထူးဆန်းတဲ့ခံစားရ, တဖန်ငိုနိုင်ထိုကဲ့သို့သောကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်တွေဘယ်လိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့တွေမြင်ဖူးလား။ အရာရာတိုင်းဟာတောက်ပတောက်ပနေသလိုပဲ၊ နှစ်ရက်အကြာမှာငါဟာငါ့ရဲ့အလုပ်ကိုတကယ်ပျော်ခဲ့တယ်။ နီးပါးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာဖြစ်ခြင်းနဲ့တူ။ ပြီးတော့ငါခဏတောင်စီးကရက်မသောက်ဘူး။
ငါနှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်အတော်လေးအများကြီးသေးငယ်တဲ့အိမ်မှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူသည့်အခန်းတစ်ခန်းတည်း၌ပင်။ သို့သော်မကြာသေးမီကမှသာကျွန်ုပ်၏ပုဒ်မခွဲ၏ဆင်ခြေဖုံး gables အပေါ်လှပသောနေဝင်ဆည်းဆာများကိုသတိပြုမိသည်။ နက်ရှိုင်းသောကြက်သွေး, မီးသတ်လိမ္မော်, ပူနွေးသောအဝါရောင်, ပွော့ပန်းရောင်။ ညတိုင်းငါ့ကိုဒီလိုအံ့ and စရာကောင်းအောင်လှပစေတယ်။ သူတို့ဟာအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့ကြတာပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါကညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့သူတို့ကိုသတိမထားမိခဲ့ဘူး။
သင်တစ်ဦး Streak အပေါ်ဖြစ်ကြပြီးအားလုံးမှာအဘယ်သူမျှမအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိလိမ့်ဟန်လျှင်ပင်သတိရပါ့အစစ်အမှန်မျက်ရည်ရန်သင့်စွမ်းရည်ကို restore ပြန်ကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏။ ဒါကဝမ်းမြောက်ခြင်းမျက်ရည်များလည်းပါဝင်သည်, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးမြူဆိုင်းသောလာပြီ။ ဒါ့အပြင်ဝမ်းနည်းမှုနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်း၏မျက်ရည်။ သင်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအရာတစ်ခုခုအစပျိုးလိုက်ခြင်းလျှင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့သီချင်းကျော်အနည်းငယ်ငို။
pmo တွင်, သင်ငိုရပါမည်သို့သော်သင်ခံစားမိနှင့်မငိုနိုင်ပါတယ်သိသောအခြေအနေများသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ သင်ခံစားရပြီးနောက်သင်လူ့ထက်တစ်နည်းနည်းနဲ့လျော့နည်းသိရ, လူတွေရှိသည်ထင်နေကြတယ်ဒီအခြေခံစွမ်းရည်မပါဘဲမရဘူးနားလည်သဘောပေါက်။ ဒါဟာစိတ်ဆင်းရဲသဘောပေါက်သည်။ ငိုနိုင်စွမ်းကိုသင့် Streak ဆက်လက်တစ်ဦးတည်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ညီအစ်ကိုတွေကနေပါ။
ကျွန်ုပ်သည် ၈ ရက်ဖြစ်သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၊ လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများစသည်တို့နှင့်လုံး ၀ ကင်းဝေးစွာနေခဲ့သည်။ အခြားကြိုးစားမှုအားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်၊
ငါ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေပေါက်ကွဲခဲ့တယ် ငါလွန်ခဲ့သော3ရက်အတွင်းနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာငိုခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မိဘများနှင့်အဘိုးအဘွားများကိုမည်မျှချစ်မြတ်နိုးကြောင်းနှင့်တစ်နေ့သူတို့ဤနေရာတွင်မရှိတော့သောအဖြစ်မှန်ကိုစဉ်းစား မိ၍ ငိုခဲ့ရသည်။ ငါ့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့စကားပြောဖို့ငါအော်ငိုခဲ့တယ်။ ဖုန်းနဲ့ဖုန်းခေါ်ရင်းငိုမိတယ်။ ဆွေမျိုးတွေသေနေတဲ့အကြောင်းအဖေပြောနေတယ်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစဉ်းစားမျက်လုံး။
ယနေ့ငါစိတ်ခံစားမှုခံစားရ 8 နေ့က
ငါမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြင်နိုင်သည်။ ငါ fapping ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည်။ ငါအခုပျော်ရွှင်နေတယ်၊ ​​ငါလည်းချစ်တယ်။ ငါသူမလည်းငါ့ကိုချစ်သောသူကိုချစ်၏ ယနေ့သူမနမ်းသည်
ငါ့ကို အရင်တုန်းကဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ အခုငါပျော်တယ်
ရုံနှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အော်ဟစ်ကြ၏။ လေးနက်သော post ကို။
ငါတစ်နေ့ 30 သို့မဟုတ်ငါ၏အ Streak ဤမျှန်းကျင်သည်လက်ရှိတွင်ဖြစ်၏။ ငါ porn နှင့်ဤဖိုရမ်ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်ကိုတွေ့သည်အထိငါတစ်ချိန်ကမိုးသည်းထန်စွာစှဲလမျးသူဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ကျွန်မကိုဘယ်သူမှမပြောဘဲ Mr. Nobody (လမ်းကစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်) ကိုကြည့်နေရင်းကလေးသည်ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအမေ၊ အဖေတို့နဲ့အတူနေမလား၊ အမေသည်အဖေကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ရထားပေါ်တက်သည်။ သူအမှားလုပ်မိသည်နှင့်သူ့အမေအတွက်ရထားနောက်သို့ပြေးလိုက်သည်။ ဝိုး။ အိုဘုရား၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ၌ဤခံစားချက်များကိုခံစားမိခြင်းကိုကျွန်တော်မမှတ်မိပါ။
၎င်းသည်အလွန်ထူးဆန်း။ အံ့ beautiful ဖွယ်လှပပြီးငိုကြွေးရန်ဝမ်းနည်းဖွယ်အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ချစ်မြတ်နိုးပြီးကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်ခံစားမှုစွမ်းရည်နှင့်ပြည့်နှက်နေသည့်ကျွန်ုပ်၏မိဘများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေး၏ဤမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေစဉ်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်။
ဒီပစ္စည်းပစ္စယသည်မူးယစ်ဆေးလား၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လောင်းကစားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလွန်အားကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စွဲလမ်းမှုမှကင်းဝေးစေနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ စိတ်ပျက်အားငယ်ချိန်၌ဖတ်ပါ။ ဤပုံပြင်သည် nofap သည်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်သည့်သာဓကဖြစ်သည်ဟုနားလည်ပါ။ သငျသညျစွဲလမ်းနေလျှင်, သင်တစ်ခုခုကိုမှအခုအချိန်မှာရေတွက်နေကြသည်! သင်ပျောက်နေသည့်အရာကိုစိတ်ကူး။ မရနိုင်ပါ။ တစ်နေ့လုံးညစ်ပတ်ပျော်စရာတစ်နေ့တာ၏တစ်သက်တာလုံးကိုစွန့်လွှတ်နေစဉ် ပွညျ့စုံ အသက်ရှင်ခြင်း!
လက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှု fapstronauts ပါစေ။ ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်ဒါရင်းသင့်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Edit ကို: ယူတာပဲ numbed ခံရ။ ငိုခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းမှုနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းတစ်ပြိုင်နက်အပေါင်းတို့, အဆင်းလှခြင်းနှင့်နာကျင်ဖြစ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်ငါကဒီရုပ်ရှင်ကိုချစ်ရုံကွောငျ့, နောက်တဖန် Toy Story3watched ။ ငါအနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့ကစောင့်ကြည့်သည့်အခါအဆုံးမှာနည်းနည်းမျက်ရည်စ-eyed ရတဲ့အောက်မေ့တော်မူ၏။
အခုတော့ NoFap အပေါ်နေချိန်မှာကျွန်မအော်ဟစ်ကြ၏။ ငါ ~ 2-3 မိနစ်ဖြောင့်ဘို့အော်ဟစ်ကြ၏။
ငါဒီတစ်ခေါက်လုံးစိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်၊ ​​အဲဒါကိုသဘောပေါက်လာတာကငါ့ကိုရေးစေချင်တယ်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ၊ အစားအစာ၊ ညစ်ညမ်းမှုတွေနဲ့အိပ်စက်ခြင်းတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုနဲ့အထီးကျန်မှုခံစားမှုတို့ကိုငါနစ်မြုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ့နေ့ရက်အများစုကိုငါ့အခန်းထဲမှာတည်းနေတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်မိဘများနှင့်အစ်မတွင်ခံစားချက်များ၊ ငါသူတို့ကိုမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုဘဲဘာလုပ်ရမှန်းပြောနေ, အာဏာပိုင်ကိန်းဂဏန်းများအဖြစ်သူတို့ကိုငါမြင်၏။ အခုတော့သူတို့ကိုလူသားတွေလို့ကျွန်တော်မြင်တော့သူတို့သွားတဲ့အခါပိုပြီးနာကျင်သွားမှာပါ။
ငါသူတို့ကိုရန်ငြိုးထားခဲ့သည့်အချိန်များနှင့်ထိုအရာများကသူတို့ကိုမည်သို့ခံစားခဲ့ရသည်ကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားတော့မည်။ ကျွန်တော့်တိတ်ဆိတ်မှုသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေခြင်းကိုအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေသော်လည်းသူတို့ရှိနေခြင်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းပြသသည့်လက္ခဏာတစ်ခုနှင့်တူပုံရသည်။ ကျွန်တော့်အဖေကအဆုတ်ကင်ဆာနဲ့အတူ ၇၁ နှစ်၊ အမေက ၅၉ နှစ်၊ အစ်မ ၃၃ နှစ်၊ ကျွန်တော့်အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးရသူများအားမလေးမစားပြုမူဆက်ဆံခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြခြင်း၊ မလိုအပ်သောငွေများဖြုန်းခြင်း၊ ရှောင်ရှားနိုင်သည့်ပြcausingနာများဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏စစ်မှန်သောမိမိကိုယ်ကိုအခွံတစ်ခုအတွင်းပုန်းအောင်းနေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုခုနဲ့စစ်မှန်တဲ့စည်းနှောင်မှုအခိုက်အတန့်မရှိခြင်း။
သူတို့သွားတဲ့အချိန်မှာငါဟာသူတို့အတွက်တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဝေမျှနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောဘဝကိုမဝေငှနိုင်သည့်ဘဝ၏အဓိကအချက်ကားအဘယ်နည်း။ ငါတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူတွေအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါ ... မြတ်နိုးဖို့ကောင်းတဲ့အမှတ်တရတွေကိုထားခဲ့မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။
porn fuck ဆိုတဲ့။
PS ငါဒီစာရေးနေစဉ်ငိုခဲ့တယ်။ ဒီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဒီလအကြိမ်ဒုတိယအကြိမ်ငိုခဲ့တယ် ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ရတာအရမ်းပျော်တယ် ညစ်ပတ်ပေရေနေတဲ့ပုံတွေကငါ့ခံစားချက်အားလုံးကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး။
နေ့ 16: ယနေ့ငါဟစ်ခေါ်သ
ငါ ၁၃ နှစ်ကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုပုံမှန်ကြည့်နေတယ်၊ ​​အခု ၂၄ နှစ်ရှိပြီ။ ငါလုံးဝ 13 ပတ်အကြာလုံးဝဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှလူ့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကိုပိုမိုသိရှိလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စာနာမှုကင်းမဲ့ခြင်းလုံးဝနီးပါးရှိနေသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ သေချာတာပေါ့ငါရယ်စရာရယ်မောနှင့်မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူအခါ, နှစ်သိမ့်ခံစားရတယ်။ သို့သော်အားလုံးသည်နက်ရှိုင်းသောအချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ sociopath ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုလို့ထင်ခဲ့တယ် ဒီဟာကငါပဲ၊ စိတ်ခံစားမှုနည်းပါးတဲ့လူသားပဲ။ ငါကနှင့်အတူအသုံးအနှုန်းများမှလာ၏။
ဒီမနက်မှာတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးနောက်မျက်ရည်များကျလာတယ်။ ငါဘယ်လိုဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့ခံစားချက်တွေကြောင့်စိတ်ဖိစီးနေတယ်။ တကယ်ပဲငါ့ကိုမျက်စိကွယ်။ ငါ nofap အောင်မြင်မှုပုံပြင်များကိုအနည်းငယ်ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ဖြိုဖျက်ခြင်း, ဤလူများ၏ရုန်းကန်မှုများကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်သူတို့၏အောင်မြင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမျှဝေခြင်းကိုပျော်ရွှင်နေသည်။
ကြှနျတေျာ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာမှိုင်းမှုကြောင့်ငါ၏အပျြောအပါးစင်တာဒါနီးကပ်စွာဒစ်ဂျစ်တယ်ရင်းမြစ်များမှ porn နှင့် instant ဆန္ဒပြည့်နဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိဖို့ခဲ့ ??
ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလက NoFap ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ရက်ပေါင်း ၄၀ မှ ၂ ချောင်းကိုလုပ်သည်၊ ယခုငါ ၁၄ ရက်တာတွင်ရှိသည်။ ငါငိုနေသည်။ ငါ့နှလုံးကြေကွဲနေပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ တောင်မှမပြောနိုင်ဘူး။ ဘာကြောင့်ငါငိုရတာလဲချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပေမယ့်အရင်ကငါခံစားခဲ့ရပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်မင်းသိလား။ ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်၊ အသက်ကြီးလာပြီ၊ ငါငိုခဲ့ပြီးပြီ၊ ငိုတာကမင်းကိုစိတ်ထဲကနေဖယ်ထုတ်ပြီးတကယ်ပဲကူညီပေးတယ်၊ ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားပြောတာကကောင်းတယ်။ No Fap သည်သင့်ကိုလူအဖြစ်ပြန်ဖြစ်စေပြီးသင်၏အားလပ်ချိန်များတွင်နိုးထစေသည်၊ ၎င်းသည်သင့်ကိုတက်ကြွစေပြီးအဆုံး၌အကောင်းဆုံးအရာကိုရှာဖွေသည်။ ယောက်ျားများကဲ့သို့ fap နှင့်မငိုပါနှင့်
မနေ့ကငါ့အမေဆီကိုလာလည်ပတ်ခဲ့တယ်။ သူမအသက် ၈၀ ကျော်မှာကျဆင်းနေတယ်။ သူမသည်ခုနစ်နာရီခန့်အကွာတွင်နေထိုင်သည်။ ငါခြောက်လခန့်တွင်သူမ၏မြင်ကြပြီမဟုတ် သူမအတော်လေးစိတ်သန်နေတုန်းမှာပဲကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကလေးတွေကိုသူနဲ့အတူသွားတွေ့ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လမ်းလျှောက်သွားရတယ်၊ မျက်ရည်ကျခဲ့တယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကသူမပျောက်ကွယ်သွားပြီးမိဘတစ် ဦး ကမင်းကိုဒီလိုမျိုးထားခဲ့တာကိုကြည့်ရတာခက်ခဲပြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဝမ်းသာစရာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ PMO လွတ်လွန်းလို့လအနည်းငယ်အကြာမှာသူနဲ့သူမတကယ်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။
ငါစိတ်ထဲတွင်ရှက်စရာမရှိ၊ PMO မှယူဆောင်လာသည့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ပင်ပန်းမှုလည်းမရှိ။ ငါသူနှင့်အတူနာရီအနည်းငယ်နေခဲ့ရသည်။ ပြီးတော့သူမငါပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သည့်မိသားစုနှင့်ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာနေရာအတွက်အမှန်တကယ်ဂုဏ်ယူသည်။ လူတွေနဲ့အတူရှိနေခြင်းဟာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ကောင်းကောင်းမဖော်ပြနိုင်ဘူး။ ငါကတိုက်ခိုက်နေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါကရှေ့ဆက်ပြီးသတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ တစ်ရက်မှာတစ်ရက်။
တစ်ခြားဂစ်တာတစ်ကိုယ်တော်ပေါ်လာသည့်အခါတစ်ခြားကားမောင်းနေစဉ်ငါကစူးစိုက်ကြည့်။ ပျော်ရွှင်သောခံစားမှုနှင့်တူသည်ဟုခံစားမိသည်။ အဲဒါဟာတခြားသူတွေအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့လား။ လူနည်းနည်းလေးကိုခံစားလိုက်ပါ !!
ကျွန်တော့်အမေသည်အစ်မနှင့်နှစ်ပတ်ကြာအားလပ်ရက်တွင်ရှိနေပြီးသူနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဝေးကွာသောအချိန်အရှည်ကြာဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ငါအေးဆေးငြိမ်သက်စွာငါ့အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့သည်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာမျက်စိကန်းလျှော့ချခဲ့သည်။ ကျွန်မမိဘရဲ့အခန်းထဲဝင်လာတာနဲ့အမျှသူမအသက် ၂၀ ကျော်မှာအိပ်ယာပေါ်ကအမေရဲ့ပုံကိုတင်ထားလိုက်တယ်။ ငါဒီစိတ်ခံစားမှုကိုမဖော်ပြနိုင်ဘူး၊ တစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကျွန်တော်မသိခင်မျက်ရည်တွေကျလာပြီးငိုတော့တယ်။ PMOing ကငါ့ဘဝကိုမကျူးကျော်ခင်ငါ့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်တွေမှတ်မိနေတယ်။ တည်ရှိပြီးနိုင်သောအမှတ်တရများစွာကအချည်းနှီးပင်များကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့သည်။ ငါဒီနေ့ကစပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတိပေးတယ်၊ ငါကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့မည်သည့်တိုက်တွန်းချက်ကိုမဆိုမိဘများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းခြင်းသို့ရောက်သွားလိမ့်မည်။ တစ်နေ့မှာသူတို့ဟာဒီကမ္ဘာကနေထွက်ခွာတော့မှာပါ။
ကျွန်တော့်အစ်မရဲ့အိမ်ကိုသူမသွားဖို့သွားကြည့်တယ်၊ ငါတို့ဘ ၀ မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောနေတာ။ သတိရပါ၊ ငါ့အစ်မနဲ့သိပ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့စကားစမြည်ပြောခွင့်မရှိဘူး၊ သူတို့တစ်ခုခုရီစရာပါပဲ။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ NOFAP ခရီးစဉ်အကြောင်းပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများ / အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းသူမကိုပြောပြခဲ့သည် ငါဘယ်သူလဲ၊ ငါဘယ်သူလဲ၊ ငါဖြစ်လာတဲ့သူ။ ငါအစ်မကိုဒီအကြောင်းတွေပြောနေတိုင်းငါဒီအကွောင်းကိုအစ်မနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာငါဟာရင်ခုန်သံတွေရုတ်တရက်ကျိုးနွံနစ်သွားတယ်၊ ငါ့အစ်မငါကငါလိုပဲငါ့ကိုကြည့်နေခဲ့ဖူးတယ်။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ငါနဲ့သူဒီမှာတွေ့ဖူးတာတစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်နေလို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ် !!! ကျွန်ုပ်သည်ပြည်တွင်း၌မမျှော်လင့်ဘဲကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည်ကိုရှက်ရန်မဟုတ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ဂုဏ်ယူသည်။ မျက်ရည်တွေသုတ်ရင်းကျွန်မအစ်မကကျွန်မကိုအမြန်ဖက်ပြီးနှစ်ရှည်လများအကြီးအကျယ်ပွေ့ဖက်ခဲ့တယ်။
သူမရယ်မောရန်ကြိုးစားရင်းရယ်မောခဲ့သည်။ “ ဘဝဟာဖြစ်ပျက်လာပြီ၊ ငါ့ညီလေးသူကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှငါပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ မင်းနဲ့မတူတာတခုကတော့ငါလက်ချောင်းမတင်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲ။ ကိုယ်တော့်ကိုကျွန်တော်အရမ်းဂုဏ်ယူတယ်”
ဒီပင်သူမ၏နှင့်အတူအသိပညာမျှဝေသည်ငါ့ဆီသို့ဦးတည်သွားစေနှင့်အညီ, သူမကျွန်တော်တို့ကိုယောက်ျားအဆက်မပြတ် + masturbate နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သုက်ပိုးဖြုန်း porn စောင့်ကြည့်ဖို့အတှကျကဖြစ်ဘယ်လိုထိခိုက်ခြင်းမရှိစိတ်ကူးခဲ့!
အဘယ်သို့ငါကျေးဇူး / ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုရူးခံစားမှုခဲ့ငါ့နှလုံး၌ခံစားခဲ့ရ, ငါငါငါ့နှမအတူမျှဝေပေးနိုင်ခဲ့သည်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ကျွန်မဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်တဲ့အတွေ့အကြုံကို။
၂၂၆ ရက် - နောက်တဖန်ငါရယ်မောနိုင်သည်။
သင်အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်နှင့်ကြက်များအတွက်သင်လာသော်လည်း NoFap သည်သင့်၌ရှိသောပြtheနာများအားလုံးကိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်သောကြောင့်သင်နေထိုင်သည်။ ငါဒီအသိုင်းအဝိုင်းမှာယခုတစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ နောက်တစ်ခါထပ်ပြန်ဖြစ်ပြီးနောက်၊ အခုငါ့ရဲ့အရှည်ဆုံး (ယခုထိခိုင်မာနေဆဲ) ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်ကိုလူကြိုက်များလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်သိသော်လည်း၊ ၎င်းကိုသင်ချိုးဖျက်ရမည်။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုသတိပြုရန်ခဲယဉ်းသည်၊ သေးငယ်။ ပေါ်လာသောအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်လူ၊
ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်လူသားနှင့်မဆိုဆက်သွယ်နိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဒါကငါက Chick Magnet ပဲဆိုတာမဆိုလိုပါဘူး။ ဒါကကြီးမားတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကငါနဲ့အမြဲတမ်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။
ငါမကြာခဏကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှုအရာမှာငါ့မြည်းကိုချွတ်ရယ်မောတွေ့ရှိရ ... တကယ်တော့တရားဝင်စိတ်ခံစားမှုရှိခြင်းယောက်ျားတွေကြီးတွေအရာဖြစ်၏။ fapping နှင့်အတူပါလာသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုံမကျိုးနပ်သည်။ လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင်ကရယ်မောခြင်း၊
ငါလူအများရှေ့မှာစိုးရိမ်စိတ်နည်းတယ် အားကစားခန်းမထဲမှာဒါမှမဟုတ်တခြားဘယ်နေရာမှာမဆိုတွားတတ်သောသတ္တဝါလို့မခံစားရတော့ဘူး။ ဒါလည်းကောင်းပါတယ်
အရင်ကမရှိခဲ့ဖူးသောလူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများကိုကျွန်ုပ်မရရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းကအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ငါခေါင်းကိုလိမ်နေသည့်အတွေးများသို့မဟုတ်စိတ်ကူးအတွေးအတုများမပါဘဲအမျိုးသမီးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ဒါဟာအများကြီးပိုလေးစားမှုခံစားရခြင်းနှင့်ငါလူတိုင်းသတိထားမိနိုင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ငါသည်ဤအကြိုးကြေးဇူးမြား၏အဘယ်သူမျှမမျှော်လင့်ထားပေမယ့်ကျွန်မအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောသူတို့သညျမြျှောလငျ့ထား။ တစ်နှစ်ခွဲကျော်တစ်နှစ်ရှောင်ငါ၏အတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများတစ်ခါတုန်းကထင်နှင့်ငါသည်သူတို့မမျှော်မှန်းထားရှိသည်ဟုဘယ်တော့မှမယ်လို့ဟာအလွန်နက်ရှိုင်းသောအဆင့်တွင်ငါ့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ထက်ပိုမိုပြင်းထန်ခဲ့ငါ့ကိုပြသခဲ့သည်။ အကျိုးကျေးဇူးများကြောင်းရောင်ပြန်ဟပ်။
ငါ GF ရှိခြင်း, လူမှုရေးလိပ်ပြာဖြစ်ခြင်း, တသမတ်တည်းပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းမှဝေး။ ဒါပေမယ့်မင်းဘာသိလဲ ငါ PMO'd သည့်အခါငါလုပ်ခဲ့တယ်ထက်အဆတထောင်ပိုကောင်းလုပ်နေတာ။ PMOing လုပ်နေစဉ်အတွင်းဤအရာအားလုံးသည်အောင်မြင်ရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ယခုသူတို့ရောက်ရှိနိုင်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်။ ဝေးပေမယ့်မျက်မှောက်၌တည်၏။
ငါ porn အခမဲ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အလွန်ကျေးဇူးတင်မိသောကြောင့်တခါတရံငါ့ကိုစိတ်ခံစားမှုစေသည်
မုသားမဟုတ်ပါ၊ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်ခရီးစဉ်တွင်ဤအောင်မြင်မှုအသစ်ကိုတွေ့ခဲ့ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်ပိုမိုကျေးဇူးတင်မိသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာယုံကြည်မှုများကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးအရှိဆုံး“ ကိရိယာ” ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်လက်တော့ပ်မှာည ၁၁း၀၀ နာရီမှာဒီမှာတစ်ယောက်တည်းထိုင်ရတာအရမ်းပျော်တယ်။ အရင်တုန်းကကျွန်တော်ပြန်ကောင်းလာအောင်သွေးဆောင်မှုကိုအလွယ်တကူခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာတော့အဲဒီစိတ်ဆန္ဒရှိဖို့ဝေးကွာနေလို့မရဘူး။
ကျွန်ုပ်အတွက်အများဆုံးကျေးဇူးတင်မိသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ဇွဲရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားလွတ်လပ်မှုပေးသောကြောင့်အမျိုးသမီးများကိုကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ငါနှင့်အတူတူပင်ကမ္ဘာနှင့်အတူတူမျှဝေခံစားရသည့်အရာများမဟုတ်ဘဲလူသားထက်နိမ့်သောအရာများဖြစ်သည်ဟုရှုမြင်ရန်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်စိတ်ကိုသူတို့၏ရှုမြင်ပုံကိုပုံသွင်းပေးသည်။ ဒီအသိပညာကကျွန်တော့်ကိုအမှန်တကယ်ရွှင်လန်းစေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းစေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမျိုးကကျွန်တော့်ကိုယူဆောင်လာနိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျှဝေချင်တယ်။ မင်းနဲ့တူတဲ့တခြားလူတွေငါနဲ့အတူဒီခရီးမှာရှိနေတဲ့အတွက်ငါဝမ်းသာတယ်။ သင်၏အခမဲ့ porn ဖြစ်ခြင်းသည်သင်၏အတွေ့အကြုံ၌သင်ရရှိသောပျော်ရွှင်မှုကိုသင်တွေ့နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ငါနင့်ကိုမချစ်ဘူး၊ ငါ့မျက်လုံးတွေမှောက်နေတယ်။ ဤအချိန်၌ပင်စာသားတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုနှလုံးသားထဲမှအမှန်တကယ်စကားပြောခဲ့သည်။ ဒီသီချင်းကိုကျွန်တော်အမြဲကြိုက်တယ် ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့အဆိုတော်ကကျွန်တော့်ကိုတကယ်စကားပြောနေတာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ညစ်ပတ်နေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရတဲ့စိတ်ခံစားမှု၊ စာနာမှု၊ ရိုးသားမှုကိုငါတကယ်ခံစားနိုင်မှာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လာရန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ ဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်ုပ်စွန့်လွှတ်လိုက်သောမိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းသည်နှစ်ပေါင်းမည်မျှကြာသည်ကိုသိစေသည် ပြန်လာပြီ
ငါဘယ်တော့မှပြန်ဒီ shit စွဲ၏အပိုင်းအစသွားဘယ်တော့မှနေပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး fam ကိုမစွန့်လွှတ်ပါနဲ့ ၄၃ ရက်အတွင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ငါတို့အသက်ပြန်ရှင်လိမ့်မယ်။
ငါဒီနေ့ပစ္စည်းပစ္စယအမျိုးအစားအားလုံးကိုခံစားနေရတယ်။ ထိုအ ok, ငါကလူ့ပါပဲ။
ယနေ့ငါငို ... အရမ်းရယ်ရတယ်
NoFap ပေါ်မှာခဏအကြာမှာဒီစွဲလမ်းမှုမခံစားရခင်ကငါခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုစတင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့်ဝမ်းနည်းသောစိတ်များသည်စိတ်နှစ်ဆပြင်းထန်စေသည်။ ဒီနေ့ငါတကယ်မထိန်းချုပ်နိုင်တော့တဲ့ငိုချလိုက်တယ်၊ ဒါကတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ NoFap ရဲ့တခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေအားလုံးကအဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိစေတယ်လို့ငါထင်တယ်။
PMOing တဲ့အခါမှာငါကအရမ်းတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပီဇာ၏နောက်ဆုံးအချပ်? ငါကယူလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့အဘို့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့ငါ့ကိုမေးတယ်? အဘယ်ကြောင့်ငါသည်လည်းသင့်
ငါသည်ငါ့သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့လူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်နှင့်ငါကပဲသတိပြုမိတယ်။
90 Days: ဘာတွေပြောင်းလဲ
လူများနှင့်0စိတ်ခံစားမှုထက်လျော့နည်းနှင့်အတူ0ဆက်သွယ်မှု
အစွန်းရောက် fetishes ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲ vanilla လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်
အမျိုးသမီးတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားမပါတစ်ခါတလေပင်ညဥ့်အခါ, ငါ့အလိုရှိသမျှအားလပ်ချိန်မှာအချိန်ကာလအတွင်း P ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း ၉၀ ကငါ Streak အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့တယ်၊ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ P or MO ကိုမကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ငါအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါငါ MO ကိုပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုဒုတိယတစ်ခုကရရှိအောင်ကူညီပေးခဲ့ခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ဤရက်ပေါင်း ၉၀ ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလူတစ် ဦး ကိုခံစားနေရသည်။ အောက်ပါတိုးတက်မှုများကိုကျွန်တော်သတိပြုမိပါတယ် -
အကြှနျုပျ၏စိတျလကျထကျ၏အများဆုံးစဉ်အတွင်းအများကြီးအများကြီး သာ. ကောင်း၏။ ငါကပိုပြုံးနဲ့လူတွေပြုံးစေခစျြ, အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးများ